ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဦး နှောက်တွင် ဦး နှောက်၏ပလပ်စတစ်မှုနှင့်အပြုအမူ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
အဆိုပါ Developing ဦးနှောက် (2011) တွင်ဦးနှောက်ကိုပလပ်စတစ်နဲ့အပြုအမူ
J ကို Can Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011 နိုဝင်ဘာလ; 20 (4): 265-276 ။
Bryan Kolb, Ph.D1 နှင့် Robbins Gibbs, Ph.D1
Editor ကိုစောင့်ကြည့်: မာဂရက် Clarke, MD နဲ့လော်ရာ Ghali, Ph.D
ဤဆောင်းပါးခဲ့ အားဖြင့်ကိုးကား PMC တခြားဆောင်းပါးများကို။
, ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ယေဘုယျအခြေခံမူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဦးနှောက် plasticity ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် plasticity သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအချက်များကိုဆွေးနွေးရန်။
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် plasticity အပေါ်သက်ဆိုင်ရာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစာမူ၏တစ်ဦးကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ကောက်ယူခဲ့သည်။
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု neurogenesis နှင့်အတူစတင်နှင့်အာရုံကြောရွှေ့ပြောင်း, ရငျ့, synaptogenesis, တံစဉ်များကိုများနှင့် myelin ဖွဲ့စည်းခြင်းမှတိုးတက်အဆင့်တစ်စီးရီးမှတဆင့်ဖြစ်စဉ်များ။ ဦးနှောက် plasticity ရှစ်အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် function ကိုထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု, psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး, gonadal ဟော်မုန်း, မိဘကလေးဆက်ဆံရေးကို, ရွယ်တူဆက်ဆံရေးကို, အစောပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှု, အူလမ်းကြောင်းသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်အစားအစာအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရပ်များကလွှမ်းမိုးကြောင်းသက်သေအထောက်အထား။
keywords: ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, ဦးနှောက် plasticity, ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာဆွ, ပီဂနြ
ဦးနှောက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်မျိုးဗီဇအသေးစိတ်အစီအစဉ်၏တွေ့ရှိနေရသည်ရိုးရှင်းသောထက်ပိုမိုထင်ဟပ်မဟုတ်ဘဲထွန်းသစ်စဦးနှောက်ပုံဖော်ကြောင့်မျိုးဗီဇများနှင့်အတွေ့အကြုံအချက်များတစ်ရှုပ်ထွေးသောကခုန်ထင်ဟပ်။ ထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု, မူးယစ်ဆေးဝါး, အစားအသောက်, ဟော်မုန်း, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရပ်များထိတွေ့ဦးနှောက်အရှင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်သည်။ လက်ရှိဆောင်းပါး၏ရည်မှန်းချက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်အကျူးများနှင့် postnatal အချက်များ၏ကျယ်ပြန့ခြင်းဖြင့်ထုဆစ်နိုင်ပါတယ်လမ်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဦးနှောက် plasticity နှင့်အကြောင်းရင်းများဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမည်သို့နောက်ဆုံးတော့တစ်ဦးထည့်သွင်းစဉ်းစား၏အခြေခံမူ၏အကျဉ်းပြန်လည်သုံးသပ်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အတူစတင်။ ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဦးနှောက် plasticity နှင့်အပြုအမူအကြောင်းကိုသိအများစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကြွက်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်လာသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှသောလူသားမြားကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်၏လေ့လာမှုများမှလာလို့ပဲ။ ကျွန်တော်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏မော်ဂျူအကြောင်းကိုသိအများစုနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လေ့လာမှုများအပျေါ၌အခြေစိုက်ကြောင့်ထို့အပြင်ဆွေးနွေးမှုနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ plasticity ဆီသို့ဦးတည် biased လိမ့်မည်။ ယုံကြည်ဖို့နည်းနည်းအကြောင်းပြချက်ကအခြားဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလားတူနည်းလမ်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း, သို့သော်ရှိပါသည်။
တချို့က 2000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရောမအတွေးအခေါ်ပညာရှင် Seneca အဘိဓါန်လူသားတစ်ဦးသန္ဓေသားသေးသေးလေးတစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပြီး, အရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တာဝန်ပိုကြီးကြီးထွားဖို့ရိုးရိုးကြောင်းအဆိုပြုထား။ ဒါကစိတ်ကူးကကျယ်ပြန့်ကောင်းကောင်း 19 သို့သည်အထိယုံကြည်ကြ၏ခဲ့သည်နိုင်အောင်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်th ရာစု။ အစောပိုင်း 20 အတွက်သိသာဒါဟာဖြစ်လာခဲ့သည်th ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုယခုကြှနျုပျတို့အမြင်ကျယ်နှစ်ခုအဆင့်သို့ခွဲခြားခံနေရအဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်သည်ကိုအဆင့်ဆင့်၏စီးရီးရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းရာစု။ အများဆုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ်များတစ်ဗီဇစိတ်ပိုင်းဖြတ် sequence ကိုထင်ဟပ် သန္ဓေသားဘအတွက် ကြောင်းမိခင်ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့် modulated နိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးသညျလူသားတို့အတွက် postnatal preand သောဒုတိယအဆင့်, ဦးနှောက်၏ဆက်သွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒါပေမယ့်လည်းအတွေ့အကြုံများဖြင့်ထုတ်လုပ်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုများ၏ပုံစံများသာမဟုတ်ဘဲအလွန်အထိခိုက်မခံအခါတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ပို. အရေးကြီးသည်သို့သော်ယခု (မျိုးဗီဇစကားရပ်၏စည်းမျဉ်းအပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရလဒ်များ, ပြောင်းလဲမှုများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲ DNA ကိုသူ့ဟာသူထက်အခြားယန္တရားများအပေါ်မှာအခြေခံဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုBlumberg, Freeman, & ရော်ဘင်ဆင်, 2010) ။ ဥပမာအားဖြင့်, မျိုးဗီဇစကားရပ်တိကျတဲ့အတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်, ဤအလှည့်အတွက်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အတွင်းစည်းရုံးရေးပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
စားပွဲတင် 1 အားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အထွေထွေအဆင့်ဆင့်ဝိသေသဖော်ပြထားပါတယ်။ အာရုံကြောစနစ်ထုတ်လုပ်ရန်လတ်ဖြစ်ကြောင်းဆဲလ်လူသားမြားသခန့်သုံးပတ် fertilization ပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းရန်စတင်။ ဤရွေ့ကားဆဲလ်တွေဦးနှောက်ရဲ့ပျိုးခင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် subventricular ဇုန်ဟုခေါ်ဝေါ်သောအာရုံကြောပြွန်, ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဲဒီအကြောင်းခုနစ်လသည်အထိ sulci နှင့် gyri ဖွဲ့စည်းရန်စတင်မထားဘူးသော်လည်း cerebrum အသက်အရွယ်လောက်ခြောက်ပတ်အတွင်းမှာအကြောင်းကို 14 ရက်သတ္တပတ်များကဌာနခွဲကိုစတင်အဆိုပါ cerebrum ဖွဲ့စည်းရန်လတ်ဖြစ်ကြောင်းဆဲလ်အဖြစ်ထင်ရှားစွာလူ့လှပါတယ်။ အများစုမှာ neurogenesis တဦးတည်းအရေးကြီးသောခြွင်းချက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် neuron ဖွဲ့စည်းရန်ဆက်လက်သော hippocampus အတွက်ဆဲလ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူငါးလနေဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ hemisphere အတွက်လူ့ဦးနှောက် cortex ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်အကြောင်းကိုတဆယ်ဘီလီယံဖိုးဆဲလ်တွေရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆဲလ်လျှင်မြန်စွာဖွဲ့စည်းထားပါသည်နှင့်၎င်း၏အထွတ်အထိပ်မှာတစ်မိနစ်လျှင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ 250,000 အာရုံခံအကြောင်းကိုရှိပါတယ်ခန့်မှန်းထားသည်။ ဒီအချိန်မှာမဆိုဦးနှောက်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းသိသာထင်ရှားသောအကျိုးဆက်များရှိနိုင်တယ်လို့သိသာသည်။
စားပွဲတင် 1 ။
အဆိုပါအာရုံခံဖွဲ့စည်းထားပါသည်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကဦးနှောက် cortex ၏မျက်နှာပြင်ဖို့ subventricular ဇုန်ကနေချဲ့ထွင်ထားတဲ့ radial glial ဆဲလ်, (ကဖွဲ့စည်း fibrous လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ပြောင်းရွှေ့ရန်စတင်ပုံ 1) ။ အဆိုပါ subventriucular ဇုန်အချို့ cortical တည်နေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့အထူးသဖြင့် subventricular ဒေသတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ဆဲလ် predisposes သော cortex ၏စရိုက်မြေပုံဆံ့ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဆဲလ်တွေပြောင်းရွှေ့အဖြစ်သူတို့တစ်န့်အသတ်ဆဲလ်-ကံကြမ္မာအလားအလာရှိသည်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့အဖြစ်မျိုးဗီဇ၏အပြန်အလှန်, ရငျ့, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုပိုမိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆဲလ်အမျိုးအစားသို့ကွာခြားဆီသို့သူတို့ကိုခုတ်မောင်း။ ဆဲလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့ပြီးတာနဲ့သူတို့အားဖြင့်ရင့်ကျက်မှစတင်ဖို့: (1) အခြားဆဲလ်တွေနဲ့ synapses များအတွက်မျက်နှာပြင်ဧရိယာများကို dendrites ကြီးထွားလာ; နှင့်, (2) synapses ဖွဲ့စည်းရေးစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့သင့်လျော်သောပစ်မှတ်မှ axon တိုးချဲ့။
ပုံ 1 ။
ဆဲလ်တွေ (သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်တည်နေရာ radial glia လျှောက် subventricular ဇုန်ကနေပြောင်းရွှေ့Kolb & Whishaw, 2009).
dendrites ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလူသားတွေအတွက်မွေးဖွားမီကစတင်ခဲ့သည်ပေမယ့်ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်လက်။ မွေးကင်းစကလေးငယ်အတွက် Dendrites ကဤလုပ်ငန်းစဉ်များအသေးစိတ်ရှင်းလင်းနေကြသည်နှင့်အများဆုံး excitatory synapses ၏တည်နေရာနေသောကျောရိုး, ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေနှင့်လာမည့်နှစ်နှစ်ကျော်ပြူးတစ်ဦးချင်းစီလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်စတင်။ Dendritic တိုးတက်မှုနှုန်းတစ်နေ့လျှင် micrometer ၏အမိန့်ပေါ်တွင်နှေးကွေးနေသည်။ axon အမည်ရတစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးမီလီမီတာလောက်ပိုမြန် 1000 ကြိမ်အကြောင်းကိုမပေါက်ပါဘူး။ ကြောင်းဆဲလ်များ၏ dendrites လုံးဝဖွဲ့စည်းထားပါသည်ရှေ့တော်၌ထိုပိုမြန်ကြီးထွားလာ axon ပစ်မှတ်ဆဲလ်ဆကျသှယျနိုငျသောကွောငျ့ဤအ differential ကိုကြီးထွားနှုန်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် axon dendritic ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ဦးနှောက်ဆားကစ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။
လူ့ဦးနှောက် cortex အတွက် synapses ဖွဲ့စည်းရေးထက်ပို 100,000 ထရီလီယံ (10 စုစုပေါင်းနှင့်အတူတစ်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတရပ်14) ။ ဤသည်ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်ဖြစ်နိုင်သည်တစ်မျိုးဗီဇ program ကမဆုံးဖြတ်နိုင်ပေမယ့်အစားဦးနှောက်အတွက်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုသာကွမျးဖငျြးမြိုးရိုးဗီဇကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောလိမ့်မည်။ synapses ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းအရှင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုနှင့်အချက်ပြမှုများအမျိုးမျိုးအားဖြင့်အရပ်သို့ပဲ့ထိန်းသည်။ ကျနော်တို့မြင်ရကြလတံ့အမျှတွေကိုနှင့်အချက်ပြမှုများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ၏ခြယ်လှယ်နှောက် circuitry အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
သူတို့ရဲ့သင့်လျော်သောဦးတည်ရာကိုသူတို့ဖွဲ့စည်းသောဆက်သွယ်မှုများညျသငျ့လျြောရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုအာရုံခံ၏နံပါတ်အတွက်မသေချာမရေရာမှမရှိစေရန်, ဦးနှောက်အပျေါမှာမူတည်ပြီး synapses ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အထွတ်အထိပ်တဦးတည်းနှစ်နှစ်အကြားဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ဖွံ့ဖြိုးရေးစဉ်အတွင်းအာရုံခံခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှစ်ဦးစလုံး overproduces cortex ၏ဒေသ။ ရုံမလိုချင်တဲ့အပိုင်းပိုင်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျောက်တဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနဲ့ရုပ်တုနှင့်တစ်ဦးစို့ဖန်တီးသူတစ်ဦးပန်းပုဆရာကဲ့သို့ဦးနှောက်ကိုလိုအပ်သည့်ဆဲလ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုဆဲလ်သေခံခြင်းနှင့် Synaptic တံစဉ်များကိုဖယ်ရှားထားတဲ့အတွက်အပြိုင်စနစ်ကရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာတင်စားထားတဲ့စို့ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြအချို့ကိုအမျိုးအစား, အတွေ့အကြုံများတဲ့ကျယ်ပြန့်, gonadal ဟော်မုန်းနှင့်ပင်စိတ်ဖိစီးမှုအပါအဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုး၏နိုင်ပါတယ်။
ဒီဆဲလ်အရှုံးနှင့် Synaptic တံစဉ်များကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအချိန်ကျော် cortical ထူပြောင်းလဲမှုများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါက cortex တကယ်အသက်အရွယ်နှစ်ခုန်းကျင်အစနှင့်အနည်းဆုံးအသက် 20 နှစ်ပေါင်းသည်အထိဆက်လက်တစ် caudal-rostral gradient ကိုအတွက်တိုင်းတာပိုမိုပါးလွှာဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာအမူအကျင့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ cortical စဉ်းကြောင်းတွေပေါ်မယ်ပတျသကျဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, cortical ထူအတွက်အပြောင်းအလဲများ MRI လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုမော်တာ Dexter ကို right-handers (ထဲတွင်လက်ဝဲမော်တာ cortex ၏လက်ဒေသမှာရှိတဲ့ cortical အထူတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသကြO'Hare & Sowell, 2008) ။ အဆိုပါပိုမိုပါးလွှာတခြွင်းချက်ပိုကောင်းအုပ်ချုပ်မှုကိုတချို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မြင်ပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်, ဘာသာစကားဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် MRI လေ့လာမှုများဘယ်ဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex (အကြမ်းအားဖြင့် Broca ရဲ့ဧရိယာ) ၏ thickened ပြခဲ့ကြ (ဆိုလိုသည်မှာမိန့်ခွန်း၏နားလည်မှုအသံ) တိုးမြှင် phonological အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ cortical အထူနှင့်အပြုအမူအကြားဒါဟာထူးခြားတဲ့အသင်းအဖွဲ့သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘာသာစကားလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဝိသေသမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, ဝေါဟာရဖှံ့ဖွိုးတိုးတပျံ့ cortical ဒေသများ (ခုနှစ်တွင်လျော့နည်းသွား cortical ထူဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်O'Hare & Sowell, 2008).
cortical အထူနဲ့အမူအကျင့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကြားရှိစပ်လျဉ်းဖွယ်ရှိကလေးငယ်များအတွက်အမူအကျင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကှဲလှဲတစ်ခုရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သာမန်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်မော်တာ Dexter (သားသမီးများ၏အကြောင်းကို 1%) နှင့်အတူကလေးများအတွက်ဘာသာစကား၏နှောင့်နှေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ cortical ထူအတွက်ပုံမှန်အပြောင်းအလဲများကိုထက်နှေးကွေး၏ရလဒ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအမသိနိုင်ပါဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် myelin ဖွဲ့စည်းရန် glial ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံး neurogenesis ပြည့်စုံသည်နှင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ပြီးနောက် astrocytes နှင့် oligodendrocytes ၏မွေးဖွားစတင်ခဲ့သည်။ CNS axon myelination မတိုင်မီလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပေးနိုငျပမေဲ့သာမန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ function ကို myelination, ထိုကဲ့သို့သော prefrontal အဖြစ်ဒေသများတွင်အသက် 18 နှစ်အကြာဖြစ်သော, ပြည့်စုံ posterior parietal နှင့်ယာယီ cortex anterior ဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှသာမှီနေသည်။
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုထို့ကြောင့်ဖြစ်ရပ်များ mitosis နှင့်အတူစတင်နှင့် myelin ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်အတူအဆုံးသတ်တဲ့အဆငျ့ဆငျ့၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဦးနှောက်အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနှင့်အတွေ့အကြုံများကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုထို့ကြောင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏တိကျသောဇာတ်စင်တွေနဲ့ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ mitosis စဉ်အတွင်းအတွေ့အကြုံများနှင့် / သို့မဟုတ်ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း synaptogenesis ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်နောက်မှတံစဉ်များကိုကာလအတွင်းအလားတူဖြစ်ရပ်များထက်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်မယ်လို့အကြောင်း, ဥပမာအားဖြင့်, အံ့ဩခြင်းမသငျ့သညျ။ အတွေ့အကြုံများမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဦးနှောက်အပေါ်သရုပ်ဆောင်နေကြတယ်။
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အထူး features တွေ
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှစျယောကျ features တွေအတွေ့အကြုံများ cortical အဖွဲ့အစည်းကိုပြုပြင်နိုင်သည်ကိုမည်သို့နားလည်သဘောပေါက်ဘို့အထူးသဖြင့်အရေးကြီးလှသည်။ ပထမဦးစွာ subventricular ဇုန်တန်းစီဆဲလ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတက်ကြွကျန်ကြွင်းသောပင်စည်ဆဲလ်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားပင်စည်ဆဲလ်များကိုပင်လူကြီးထဲမှာ, ဦးနှောက်အဖြူသို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်ကိုအာရုံကြောသို့မဟုတ် glial progenitor ဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆဲလ်တွေတိုးချဲ့ကာလအဘို့ဤတည်နေရာများတွင် quiescent ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပေမယ်အာရုံခံနှင့် / သို့မဟုတ် glia ဖြစ်စေထုတ်လုပ်ရန် activated နိုင်ပါသည်။ ဤအဆဲလ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုညံ့ဖျင်းပစ္စုပ္ပန်မှာနားလည်သဘောပေါက်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖွယ်ရှိ, ဥပမာ (အထူးသဖြင့်ဒဏ်ရာပြီးနောက်, postnatal neurogenesis အနည်းဆုံးတဦးတည်းပုံစံ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းနေသည် Gregg, Shingo, & Weiss, 2001; Kolb et al ။ , 2007) ။ ထို့အပြင်မျောက်ဦးနှောက်အပါအဝင်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်သည်, olfactory မီးသီးအဘို့အလတ်ဖြစ်ကြောင်းလူကြီးအတွက်အာရုံခံ, hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအခြားဒေသများ (ဥပမာ generate နိုငျသညျ, Eriksson et al ။ , 1998; Gould, Tanapat, Hastings, & Shors, 1999; Kempermann & Gage, 1999) ။ ဤအဆဲလ်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍနေဆဲအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်အတွေ့အကြုံ, မူးယစ်ဆေးဝါး, ဟော်မုန်းနှင့်ဒဏ်ရာအပါအဝင်များစွာသောအချက်တွေကလွှမ်းမိုးထားနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယအထူးအင်္ဂါရပ် dendrites နှင့်ကျောရိုးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်နှင့်အချို့သောအတွေ့အကြုံများ (ဥပမာပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်သည်ပင်မိနစ်နာရီအတွင်း synapses ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်နိုင်ပါတယ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့ plasticity ပြသသောဖြစ်ပါသည်, Greenough & Chang, 1989) ။ မျက်နှာပြင်တွင်, ဒီအစောပိုင်းကဖော်ပြထား Synaptic တံစဉ်များကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် synapses ၏ overproduction ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူအလေးသာမှာဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဓိကအချက် Synaptic တံစဉ်များကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်, ဦးနှောက်ဟာတစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံး synapses ဖွဲ့စည်းရန်ဆက်လက်ပါဘူးနှင့်တကယ်တော့ထိုအ synapses သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ Greenough, Black နဲ့ Wallace (1987) အစောပိုင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် synapses ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လူကြီးစဉ်အတွင်းရှိသူများအကြားအခြေခံကွာခြားချက်ရှိကွောငျးစောဒကတက်ကြသည်။ အထူးသ, သူတို့ကအစောပိုင်းဖွဲ့စည်း synapses သူတို့ကိုကျောသုတ်သင်ဖို့ပြုမူရာ "မျှော်လင့်" အတွေ့အကြုံများ, ဖြစ်ကြောင်းကိုငြင်းခုန်။ သူတို့က "အတှေ့အကွုံ-မျှော်" ဤ synapses မခေါ်နဲ့သူတို့ cerebrum တလျှောက်လုံးပျံ့တွေ့သမျှသောသတိပြုပါ။ ဆနျ့ကငျြ, အကြာတွင် synapses ဖွဲ့စည်းရေးပိုပြီး focal နှင့်တိကျသောအတွေ့အကြုံများကို processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများမှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီသည်။ သူတို့ကဤ synapses LABEL "အတွေ့အကြုံကို-မှီခို။ " synapses အပေါ်အတွေ့အကြုံကို-မှီခိုသက်ရောက်မှုတစ်ခုမှာစပ်စုရှုထောင့်တိကျသောအတွေ့အကြုံများကိုရွေးချယ် synapses ဖွဲ့စည်းရေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြပါဒါပေမယ့်လည်း Synaptic အရှုံး selective ဖို့မသာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံများနှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တံစဉ်များကို synapses အားဖြင့်အာရုံကြောကွန်ရက်များပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ဤသည်ကဦးနှောက် plasticity ၏ပြဿနာမှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်နေသည်။
ကျွန်တော်ဦးနှောက် plasticity သြဇာလွှမ်းမိုးသောအတွေ့အကြုံများကိုဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီ, ကျွန်တော်ခေတ္တမျှပုံမှန်ဦးနှောက်ထဲမှာ plasticity အတော်ကြာ key ကိုအခြေခံမူပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
1 ။ ဦးနှောက်အတွက်အပြောင်းအလဲများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများစွာသောအဆင့်ဆင့်ကိုပြသနိုင်ပါ
အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးကပြောင်းလဲမှုကိုဆက်ဆက်ဦးနှောက်ထဲမှာတချို့အပြောင်းအလဲကနေဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဒါပေမယ့်ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောများ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ၌ရှိသကဲ့သို့အပြောင်းအလဲများဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာထဲကနေပေါ်မူတည်ပြီးစေခြင်းငှါ, Vivo အတွက် ပုံရိပ်, ဒါပေမယ့်ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေဝေးနှင်ထုတ်သောမော်လီကျူးဖြစ်စဉ်များကနေဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုယူဆရ Synaptic ပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်ပေမယ် Synaptic အပြောင်းအလဲများကိုဒါအပေါ်မှာပိုပြီးမော်လီကျူးထိုကဲ့သို့သောလိုင်းများအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံအဖြစ်အပြောင်းအလဲမျိုးဗီဇစကားရပ်နှင့်ထံမှဖြစ်ပေါ်။ ဦးနှောက် plasticity လေ့လာနေအတွက်ပြဿနာကအကောင်းဆုံးဟုမေးခံရမေးခွန်းကိုက်ညီမယ့်အငှားအမှတ်အသားကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်လစီယမ်လိုင်းများအတွက်အပြောင်းအလဲများရိုးရှင်းသောသင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပေမယ့်ဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုကိုနားလည်ဘို့လက်တွေ့များမှာမည်အကြောင်းတည်းသီးခြား synapses မှာ Synaptic ပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာနေဘို့ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆုံးစွန်သောအကောင်းဆုံးနေဖြင့်လေ့လာခဲ့စေခြင်းငှါ Vivo အတွက် ဆဲလ် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၏ပုံရိပ်သို့မဟုတ် postmortem ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ဥပမာ, Jacobs & Scheibel, 1993) ။ သင့်လျော်သောအဆင့်ကိုလက်မှာသုတေသနမေးခွန်းတစ်ခုကိုပစ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ အမြားဆုံးဒဏ်ရာပြီးနောက်အလုပ်လုပ်တဲ့တိုးတက်မှုလှုံ့ဆော်ဖို့အတှကျမဟာဗျူဟာများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာရေးခန္ဓာဗေဒ (ဆဲလ် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ဆက်သွယ်မှု), ဇီဝကမ္မ (cortical ဆွ) ကိုသုံးခြင်း, Vivo အတွက် ပုံရိပ်။ ဤအဆင့်တစ်ခုချင်းစီကိုပိုမော်လီကျူးအဆင့်ဆင့်အပြုအမူမှပြန်ပြောပြဖို့ပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြသော်လည်းနှစ်ဦးစလုံးသည်လူ့ခြင်းနှင့် nonhuman လေ့လာမှုများအတွက်အမူအကျင့်ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ခံရနိုင်ပြီး, အထူးသဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။
2 ။ အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာလွတ်လပ်စွာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်တခါတရံဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန်အတွက်
အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အဘို့အစားထိုးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံခံပြောင်းလဲမှုများကိုကြည့်ရှုရန်စာပေထဲမှာစိတ်သဘောထားရှိခဲ့သည်။ အသုံးအများဆုံးတစ်ခုမှာကျောရိုးသိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုများ dendritic အရှည်နှင့်အပြန်အလှန်အပြောင်းအလဲများရောင်ပြန်ဟပ်သည်ဟုယူဆရန်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ခုအစီအမံဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းညွန် (ဥပမာထဲမှာလွတ်လပ်စွာနှင့်တခါတရံတွင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ဒီအရာကအမှုဖြစ်ဖို့မထွက်လှည့်, Comeau, McDonald, & Kolb, 2010; Kolb, Cioe, & Comeau, 2008) ။ ထို့အပွငျကွဲပြားခြားနားသော cortical အလွှာအတွက်, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့ယူဆကော်လံထဲမှာဆဲလ်တွေ, ဥပမာ (အတူတူပင်အတွေ့အကြုံများရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုကိုပြသနိုင်, Teskey, Monfils, Silasi, & Kolb, 2006).
3 ။ အတှေ့အကွုံ-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကို focal ဖြစ်လေ့
ဦးနှောက်ကိုဖြတ်ပြီးကျယ်ပြန့်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အတွေ့အကြုံများမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများထင်တဲ့သဘောထားကိုလည်းမရှိပေမယ့်, ဒီခဲအမှုကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများကြီးမားသောအပြုအမူအပြောင်းအလဲများထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အာရုံခံအပေါ်ကျယ်ပြန့်စူးရှသက်ရောက်မှုရှိပေမယ့်နာတာရှည်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် focal ဖြစ်ကြပြီးအကြီးအကျယ် prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens (ဥပမာဖို့ချုပ်ထားစေခြင်းငှါ ရော်ဘင်ဆင် & Kolb, 2004) ။ ရလဒ်အဖြစ်သုတေသီများဂရုတစိုက်ကိုအကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုမတိကျတဲ့အတွေ့အကြုံများပြီးနောက်ကြည့်ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်မှာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူပတျသကျကြောင်း Synaptic ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရန်တစ်ဦးကပျက်ကွက်ပြောင်းလဲမှုများမရှိခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားမဟုတ်ပါဘူး။
4 ။ ပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအချိန်-မှီခိုနေကြ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Synaptic အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအကြီးဆုံးအပြောင်းအလဲများကိုရှုပ်ထွေးသော ( "သန့်စင်" ဒါခေါ်) enviroments မှာဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအားမရတုံ့ပြန်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာ cortex တစ်လျှောက်လုံးကျယ်ပြန့်သောအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ ဤပြောင်းလဲမှုများ focal ဖြစ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကို-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကို၏နိယာမကိုအန်တုဖို့ပေါ်လာပေမယ့်ပြောင်းလဲမှုအစဉ်အဆက်တို့ကြောင့်အမြင်အာရုံ, ထိတွေ့နိုင်သောအဖြစ်ပျံ့, အာရုံ, olfactory, မော်တာနှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံများအဖြစ်အတွေ့အကြုံများအပါအဝင်အတွေ့အကြုံများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘာဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဤပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများအားလုံးအမြဲတမ်းမဟုတ်ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။
ကြွက်ရှုပ်ထွေး enviroments မှာနေရာချသောအခါဥပမာအားဖြင့်, ရှုပ်ထွေးသောအိမ်ယာ၏လေးရက်အကြာမှာမြင်နိုင်ပါသည်ပေမယ် 14 ရက်အကြာမှာပျောက်ကွယ်သွားသော prefrontal cortex အတွက် dendritic အရှည်အတွက်ယာယီတိုးလည်းမရှိ။ ဆနျ့ကငျြမျှလေးရက်အကြာမှာအာရုံခံ cortex အတွက်သိသာသောအပြောင်းအလဲပေမယ် 14 ရက်အကြာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ထင်ရသောအမြဲတမ်း, အပြောင်းအလဲများကို (ရှိပါတယ်Comeau et al ။ , 2010).
ဦးနှောက်အာရုံကြောဆဲလ်အတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောနာတာရှည်နှင့်ယာယီအတွေ့အကြုံကို-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကိုရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှုပ်ထွေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတုံ့ပြန်နာတာရှည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကွဲပြားခြားနားသောမျိုးဗီဇ (ဥပမာရှိပါတယ်ဖေါ်ပြခြင်းမျိုးဗီဇလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် Rampon et al ။ , 2000) ။ အာရုံခံကွန်ရက်များအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအပြုအမူဆက်စပ်ပုံကိုယာယီနှင့်အမြဲတမ်းအတွင်းကွာခြားချက်မသိနိုင်ပါဘူး။
5 ။ အတှေ့အကွုံ-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကိုအပြန်အလှန်
လူသားတွေဟာအတွေ့အကြုံများတဲ့တစ်သက်တာမွေးဖွားမီစတငျနှင့်သေခြင်းသည်အထိဆက်လက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအတွေ့အကြုံများကိုအပြန်အလှန်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်များ Juvenile အဖြစ်သို့မဟုတ်လူကြီးအတွက်ဖြစ်စေ psychomotor စိတ်ကြွဆေးနှင့်ထိတွေ့နေကြပါလျှင်, အကြာတွင်အတွေ့အကြုံများတဲ့ attenuated-အများကြီး (သို့မဟုတ်တခါတရံတွင်ပျက်ကွက်) ရှိသည်သောဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်သက်ရောက်မှုကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ကြွက်တစ်ချိန်ချိန်အကြာတွင်ထို့နောက်လူကြီးများနှင့်အမျှ Juvenile သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးအဖြစ် methylphenidate ပေးသောအခါဥပမာအားဖြင့်, ရှုပ်ထွေးသော enviroments မှာနေရာချနေကြသည်သို့မဟုတ်တာဝန်များကိုသင်ယူခြင်းအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း, အကြာတွင်အတွေ့အကြုံကို-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကိုပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ အဘယ်အရာကိုအံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအာရုံခံ cortical ဒေသများပေါ်တွင်မဆိုသိသာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမပြဘူးသော်လည်း, ကြိုတင်ထိတွေ့ဥပမာ (ဤဒေသများအတွက်မျှော်မှန်းအပြောင်းအလဲများကိုကာကွယ်ဖြစ်ပါသည် Kolb, Gibb, & Gorny, 2003a) ။ ဤရွေ့ကားမူးယစ်ဆေး-အတွေ့အကြုံကို interaction ကသို့သော် unidirectional မရှိကြပေ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြွက်သူတို့၏အမျိုးအနွယ် (သန္ဓေသားရက်ပေါင်း 20-12) တွင်အကျယ်ချဲ့နှောက် neurogenesis ၏ကာလအတွင်းတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် 18 မိနစ်များအတွက်ပျော့ဖိအားပေးသောအခါ, သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်သည် prefrontal cortex (PFC) တွင်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related အပြောင်းအလဲများကိုကိုပြသပေမယ့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (မျှစာနယ်ဇင်းတစ် ဦး အတွက်မိုဟာမက် & Kolb) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘယ်ကဒီစွဲလမ်းများအတွက်ဆိုလိုပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံများဦးနှောက်အပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုအတွက်အပြန်အလှန်ကြောင်းပြသထားဘူး၏ပြီးပြည့်စုံမရှိခြင်းလည်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
7 ။ ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုအသက်အရွယ်-မှီခိုနေကြ
ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူသို့မဟုတ် senescent ဦးနှောက်ထက်အတွေ့အကြုံများပိုမိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆထားသည်။ ဤသည်အများဆုံးဆက်ဆက်မှန်ကန်ပေမယ့်အခြားအရေးကြီးသောတွန့်ရှိပါတယ်: ဦးနှောက်ထဲမှာသှေးကွဲပြားခြားနားသောအပြောင်းအလဲကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်မှာတူညီတဲ့အတှေ့အကွုံဖြစ်ပေါ်လာသောအဘယ်အရာကိုတုန့်ပြန်ရှိပါတယ်။ ကှာသောသူ, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, ဒါမှမဟုတ် senescent ကြွက်ရှုပ်ထွေးပြီးပတ်ဝန်းကျင်၌ထားကြ၏တဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောအုပ်စုများကြီးမားသော Synaptic အပြောင်းအလဲများပြသပေမယ့်သူတို့ကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ရှုပ်ထွေးအိုးအိမ်မှတုန့်ပြန်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတစ်ခုတိုးလာမျှော်လင့်သော်လည်းအထူးသ, ဤအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့် senescent ကြွက်များတွင်သာစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ Juvenile တစ်ပြသခဲ့သည်အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထဲတွင်နေရာကြွက်များ လြော့ပေါ့စေ (ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်Kolb et al ။ , 2003a) ။ အဆိုပါဆွလူကြီးအတွက်ပါလျှင်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက်တစ်ဦးကအလားတူတစ်စက်မွေးကင်းစကြွက်အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးဆယ်ရက်ကျော်နေ့စဉ်, 15 မိနစ်ပျော့ပျောင်းဖြီးနှင့်အတူသုံးကြိမ်ထိတွေ့နိုင်သောဆွပေးခဲ့သည့်အတွက်နောက်ပိုင်းတွင်လေ့လာမှုများ၌တွေ့ပေမယ့်မခံခဲ့ရ (Gibb, Gonzalez, Wagenest, & Kolb, 2010; Kolb & Gibb, 2010) ။ Synaptic ပြောင်းလဲမှု၏အသက်အရွယ်-မှီခိုသဘောသဘာဝရှင်းလင်းစွာအတွေ့အကြုံများကိုဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့အရေးကြီးပါသည်။
8 ။ အားလုံးကတော့ plasticity သည်ကောင်း
စာပေ၏အထွေထွေအကျဉ်းချုပ်ဦးနှောက်ထောက်ခံမှုအတွက်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲမော်တာများနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်, ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းအပြုအမူနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျပေမယ့်။ A ကောင်းဆုံးသာဓက psychomotor စိတ်ကြွဆေး (ဥပမာတုံ့ပြန်တွင်တွေ့မြင်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပါသည်, ရော်ဘင်ဆင် & Kolb, 2004) ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးစွဲ၏ maladaptive အပြုအမူအချို့ကို prefrontal အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာမူးယစ်ဆေး-related အပြောင်းအလဲများကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့အဆိုပြုဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ ရောဂါဗေဒနာကျင်မှုအပါအဝင်ရောဂါဗေဒ plasticity ၏များစွာသောအခြားဥပမာများ (ရှိပါတယ်Baranauskas, 2001အနာရောဂါမှ), ရောဂါဗေဒတုံ့ပြန်မှု (Raison, Capuron, & Miller က, 2006), ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ (Teskey, 2001), schizophrenia (Black က et al ။ , 2004), နှင့်စိတ်ဖောက်ပြန် (Mattson, Duan, Chan, & Guo, 2001).
ရောဂါဗေဒ plasticity များစွာသောလေ့လာမှုတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ရှိနေကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်တစ်ဦးသိသာဥပမာသန္ဓေသားအရက်ရောင်စဉ်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဥပမာသိသိသာသာအဆိုပါ prefrontal cortex (ဥပမာအတွက်အာရုံခံ၏ရှုပ်ထွေးလျှော့ချရန်ပြသထားပြီးဖြစ်သောပြင်းထန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပါသည်, Murmu et al ။ , 2006အလှည့်၌ (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နှင့်လူကြီးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးဥပမာသာမန်သိမြင်မှုနှင့်မော်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်) နှင့်, Halliwell, 2011) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများအခြေခံသည့်ယန္တရားများညံ့ဖျင်းပါကအစောပိုင်း postnatal စိတ်ဖိစီးမှု (ဦးနှောက်ထဲမှာမျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုလူသိများသည်နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်ဖြစ်သော်လည်းရက်ကန်း et al ။ , 2004; Weaver, Meaney, & Szf, 2006).
သုတေသီများ 1950s နှင့် 1960s အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ထဲမှာအတှေ့အကွုံ-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကိုစတင်လေ့လာခဲ့တဲ့အခါ, ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုသာထိုကဲ့သို့သောမှောင်မိုက်၌ကြီးပြင်းလျက်ရှိအဖြစ်အတွေ့အကြုံကိုအတွက်မဟုတ်ဘဲကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများ, တုန့်ပြန်သိသာပါလိမ့်မယ်တဲ့သဘာဝအယူဆချက်ရှိ၏။ အတိတ် 20 နှစ်တွေကြောင့်ပင်တရားမျှတစွာဗလာ-ရှာဖွေနေအတွေ့အကြုံများအလှနျဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပြောင်းလဲပစ်နိုင်မတှေ့အကွုံမြား၏အကွာအဝေးကိုတစ်ကြိမ်တွေ့မြင် (ယုံကြည်သည်ခဲ့ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ကြောင်းကိုနိုင်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည် စားပွဲတင် 2) ။ ကျနော်တို့အများဆုံးကောင်းစွာလေ့လာသက်ရောက်မှုအချို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။
စားပွဲတင်2။
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် function ကိုလွှမ်းမိုးအချက်များ
1 ။ အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာအတွေ့အကြုံများ
ပြင်းထန်စွာဆင်းရဲနွမ်းပါးပတ်ဝန်းကျင်မှာသို့မဟုတ်ဒါခေါ်သန့်စင် enviroments မှာဖြစ်စေထားရှိအသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးအတှေ့အကွုံ manipulate ရန်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတိရိစ္ဆာန်များမှစံဓာတ်ခွဲခန်းလှောင်အိမ်တွင်နေထိုင်သောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ချို့တဲ့ထိုကဲ့သို့သောမှောင်မိုက်၌အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ, တိတ်ဆိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးအထီးကျန်မှုတွေအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းရှင်းလင်းစွာဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု retards ။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးတည်းကြီးပြင်းခွေးခွေးပေါက်စနာကျင်အတွေ့အကြုံများ (တစ်ဦးကို virtual အာရုံမခံစားနိုင်သောအပါအဝင်အပြုအမူမူမမှန်၏ကျယ်ပြန့ပြသHebb, 1949) ။ အလားတူပင်မျောက်, ကြောင်များနှင့်မှောင်မိုက်၌ကြွက်ကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားတိရိစ္ဆာန်များမွေးမြူပြင်းထန်စွာဟာအမြင်အာရုံစနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှောင့်ယှက်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးလူသိများဆင်းရဲချို့တဲ့လေ့လာမှုရှိသူများဖြစ်ကြသည် Weisel နှင့် Hubel (1963) သူကား, အပိတ်နှင့်အနောက်ပိုင်းတွင်မျက်စိဖွင့်လှစ်သောအခါ Spatial ရူပါရုံကို (amblyopia) (ဥပမာတစ်ခုမွဲဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေါက်များထဲမှမျက်ခွံ sutured Giffin & Mitchell က, 1978) ။ ကိုယ်ကသာမကြာသေးမီကသို့သော်စုံစမ်းစစ်ဆေးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း, အမည်ရတိရိစ္ဆာန်များပေးခြင်းရူပါရုံကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီ။ တဦးတည်းကြော့လေ့လာမှုမှာတော့ Prusky et al ။ (Prusky, Silver, Tschetter, Alam, & Douglas, 2008) ကြွက်မတူညီသော Spatial အကြိမ်ရေ၏ဒေါင်လိုက်လိုင်းတိရစ္ဆာန်အတိတ်ပြောင်းရွှေ့ရသောတစ်ဦးကို virtual optokinetic သည့်စနစ်၌ထားကြ၏ရသောအမြင်အာရုံဆွတဲ့ဝတ္ထုပုံစံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါမျက်စိရွေ့လျားဆန်ခါဆီသို့ဦးတည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် oriented များမှာလျှင် Spatial ကြိမ်နှုန်းဟာသိမှုဆိုင်ရာအာရုံအကွာအဝေးအတွင်း၌လျှင်, ယင်းရွေ့လျားလိုင်းများခြေရာခံကိုရှောင်ကြဉ်ရန်လူသားများအပါအဝင်တိရစ္ဆာန်များအဘို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါစာရေးဆရာမျက်စိဖွင့်ပွဲ (postnatal နေ့က 15) ၏နေ့ကအောက်ပါအကြောင်းကိုနှစ်ပတ်အတွင်းများအတွက်ယန္တရားအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုတင်လိုက်တယ်။ လူကြီးအတွက်တွေလိုပဲအမြင်အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးသောအခါ, တိရိစ္ဆာန်များအစောပိုင်းကုသဘဲတိရိစ္ဆာန်များမှတွေလိုပဲအမြင်ဆွေမျိုးတစ်ဦး 25% တိုးမြှင့်အကြောင်းကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Prusky လေ့လာမှု၏ဂုဏ်အသရေတိုးတက်လာသောအမြင်အာရုံ function ကိုထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုသင်ယူခြင်း၌ရှိသကဲ့သို့တိကျတဲ့သင်တန်း, အပေါ်မှာအခြေခံ, ဒါပေမယ့်တိုးမြှင့်အမြင်အာရုံ input ကိုတုန့်ပြန်သဘာဝကျကျဖြစ်ပွားခဲ့သည်မခံခဲ့ရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ကြံစည်နေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသုံးပြီးထိတွေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြ Schanberg နှင့်ဖျော်ဖြေမှု (1987)။ ဒီလေ့လာမှုတွေအတွက်မွေးကင်းစကလေးကြွက်ကလေးမွေးဖွားမှာစတင် 15-10 နေ့ရက်ကာလအဘို့ 15 မိနစ်သေးငယ်တဲ့ဖြီးနှင့်အတူထိတွေ့နိုင်သောဆွတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမွေးကင်းစလူကြီးအတွက်လေ့လာခဲ့ကြသောအခါသူတို့နှစ်ဦးစလုံးပိုမိုကျွမ်းကျင်မော်တာစွမ်းဆောင်မှုနှင့် Spatial သင်ယူမှုအဖြစ်နှောက် cortex ဖြတ်ပြီး Synaptic အဖွဲ့အစည်းကပြောင်းလဲမှုများ (ဥပမာပြသ Kolb & Gibb, 2010) ။ အဆိုပါထိတွေ့နိုင်သောဆွ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏တိကျသောယန္တရားကိုမသိရပေမယ့်ကျနော်တို့ထိတွေ့နိုင်သောဆွနေတဲ့ neurotrophic အချက်များ၏ထုတ်လုပ်မှုတိုးမှဦးဆောင်ကြောင်းပြသကြပါပြီ, အရေပြားနှင့်ဦးနှောက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် fibroblast growth factor-2 (FGF-2) (Gibbs, 2004) ။ FGF-2 ပုံမှန်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှလူသိများသည်နှင့် perinatal ဦးနှောက်ဒဏ်ရာ (ဥပမာအနေဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူလှုံ့ဆော်နိုငျသညျ, Comeau, အလျင်အမြန်, & Kolb, 2007) ။ FGF-2 စကားရပ်လည်းကြွယ်ဝပြည့်စုံအိုးအိမ်များနှင့်ဦးနှောက်အတွက်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုလှုံ့ဆော်နှစ်ဦးစလုံး၏ psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး, (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) အပါအဝင်ကုသမှုအမျိုးမျိုးတုန့်ပြန်တိုးလာနေပါတယ်။
အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်အခြားသောနည်းလမ်းတိရိစ္ဆာန်များတစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အာရုံခံနှင့်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန်နှင့်ပုံမှန်လှောင်အိမ်ထက် ပို. မော်တာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိသည့်အတွက်ရှုပ်ထွေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိရိစ္ဆာန်များနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများ၏ဤပုံစံနှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲများကို၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ "သန့်စင်။ " ဦးနှောက်အရွယ်အစား, cortical အထူ, အာရုံခံဆဲလျအရွယ်အစား, dendritic အကိုင်း, ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ, အာရုံခံဆဲလျနှုန်း synapses, glial နံပါတ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးနှင့်သွေးကြော Arbore အတွက်အဲဒီပါဝင်သည်တိုး (ဥပမာ Greenough & Chang, 1989; Siervaag & Greenough, 1987) ။ ဤပြောင်းလဲမှုများများ၏ပြင်းအားလျှော့တွက်မဖြစ်သင့်။ ဥပမာအားဖြင့်, သန့်စင် enviroments မှာ 60 နေ့ရက်ကာလအဘို့အိမ်ရာငယ်ရွယ်ကြွက်များ၏သက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုများအတွက်ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသော 7-10% ၏အမိန့်အပေါ်ခြုံငုံဦးနှောက်အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုများ (ဥပမာ, ကိုစောင့်ရှောက်မည် Kolb, 1995) ။ ဦးနှောက်အလေးချိန်၌ဤတိုး glia နှင့်သွေးကြော, အာရုံခံဆဲလျ Soma အရွယ်အစား, dendritic ဒြပ်စင်များနှင့် synapses များ၏အရေအတွက်တိုးထင်ဟပ်။ ဒါဟာတိုးလာ synapses ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကိုခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်တစ်ခုထူးခြားသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်သော cortex အတွက် 20% ၏အမိန့်အပေါ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများမဆိုအသက်အရွယ်မှာအတှေ့အကွုံ-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကိုကိုပြသပေမယ့်အရေးကြီးတာက, နှစ်ခုမျှော်လင့်မထားတဲ့အရေးအကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ လူငယ်ကြွက်အလားတူပြသသော်လည်းပထမဦးစွာမဆိုအသက်အရွယ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ဟာဦးနှောက် cortex အများစုဖြတ်ပြီးကြီးမားတဲ့ dendritic အရှည်တိုးခြင်းနှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကိုပြသ တိုးမြှင့်လာသည် dendritic အရှည်ပေမယ့်တစ်ဦးအတွက် လြော့ပေါ့စေ ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ၌တည်၏။ ဒါကဖြစ်ပါသည်, ထိုလုလင်သည်တိရိစ္ဆာန်များ (အဟောင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအပေါ် synapses ၏ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့သှေးကွဲပြားခြားနားသောပြောင်းလဲမှုကိုပြသKolb et al ။ , 2003a) ။ ဒုတိယအချက်အရသောအခါကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆည်ကြိုတင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်ရှစ်နာရီနေ့အဘို့ရှုပ်ထွေး enviroments မှာနေရာချပြီးတော့သုံးရက်သတ္တပတ်ကိုယ်ဝန်တစ်လျှောက်လုံးသူတို့၏မွေးကင်းစများ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူဦးနှောက်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ပြသခဲ့ကြသည် လြော့ပေါ့စေ dendritic အရှည်နှင့်တစ်ဦးအတွက် တိုးမြှင့်လာသည် ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ၌တည်၏။ ထို့ကြောင့်မသာ၏တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အတှေ့အကွုံပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာလူငယ်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်လူကြီးအတွက်ဖြစ်စေအတွေ့အကြုံကနေသှေးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ တိုးမြှင့်သိမြင်မှုနှင့်မော်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖို့ရှုပ်ထွေးသောအိမ်ရာခဲတုံ့ပြန်အတွက်အပြောင်းအလဲများသေအချာ, ရှိသမျှ။
ဒီလေ့လာမှုတွေကနေသုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမက်ဆေ့ခ်ျရှိပါသည်။ ပထမဦးစွာအာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာအတွေ့အကြုံများတဲ့ကျယ်ပြန့်ဦးနှောက်ထဲမှာရှည်တည်မြဲပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာတူညီအတွေ့အကြုံကိုကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်မှာကွဲပြားခြားနားဦးနှောက်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ တတိယ, ဖွံ့ဖြိုးရေးစဉ်အတွင်း Synaptic plasticity နှင့်အပြုအမူများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအကြားမျှရိုးရှင်းသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ်။ အချို့ကားအဘယျသို့သျောလညျးဤအစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများဖှံ့ဖွိုးတိုးတစဉ်နှင့်လူကြီးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းအပေါ်အားကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
2 ။ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ
ဒါဟာတာရှည်အရက်စောစောထိတွေ့မှုကဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် deleterious ကြောင်းလူသိများခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်သူကသာမကြာသေးမီကဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအပါအဝင်အခြား psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများ, သိသိသာသာဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုပြသထားသည်။ Robinson နဲ့ Kolb (2004) လူကြီးအတွက် psychomotor စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့ PFC အတွက်ဆဲလ်များနှင့်နျူကလိယ accumbens (NACC) ၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသညျဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ medial prefrontal cortex အတွက် dendritic အရှည်နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက် (စိတ်ကြွဆေး, ကင်း, နီကိုတင်း) ထုတ်လုပ်တိုး (mPFC) နှင့် NACC သော်လည်း, Orbital တိုကျရိုကျ cortex (OFC) တွင်, ဒါမှမဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်ဤအစီအမံများအတွက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းဖြစ်စေရှိခဲ့ မရှိပြောင်းလဲမှု။ သူတို့ကနောက်ပိုင်းတွင် psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးလုံးဝနီးပါးတိုင်းလူတန်းစားကိုလည်း PFC ပြောင်းလဲမှုများထုတ်လုပ်လျက်, သက်ရောက်မှုနှစ်ခု prefrontal ဒေသများတွင်တသမတ်တည်းကွဲပြားခြားနားကြသည်ကြောင်းကိုပြသသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ကိုမကြာခဏသန္ဓေသားဘဒါမှမဟုတ် postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းဖြစ်စေ, psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ကြောင်းပေးထားကျနော်တို့ဒီဆေးတွေ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ရှိသည်မယ်လို့အဘယျသို့သက်ရောက်မှုမေးတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုများလူငယ်ကာလ (ဥပမာစဉ်အတွင်းပေးထားစိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ် methylphenidate ၏သက်ရောက်မှုမှာကွညျ့ရှု Diaz, Heijtz, Kolb, & Forssberg, 2003) ။ နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါး PFC ၏အဖှဲ့အစညျးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဆား-ကုသကစားဖော်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်တစ်စမ်းသပ်မှုအပေါ်ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်လျှော့ချကစားစတင်ပြသအဖြစ် dendritic အပြောင်းအလဲမူးယစ်ဆေး-ကုသကြွက်များတွင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပြဇာတ်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ Psychomotor စိတ်ကြွဆေးအရှင် PFC ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်နှင့်ဤနောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌ prefrontal-related အပြုအမူတွေအပေါ်အမူအကျင့်မူမမှန်ထင်ရှားနေသည်ပေါ်လာပါသည်။
ကလေးများလည်းဖြစ်စေညွှန်းဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့စေခြင်းငှါ သန္ဓေသားဘအတွက် သို့မဟုတ် postnatally ။ မူးယစ်ဆေးသုံးလေ့သတ်မှတ်ထားသောအတန်း antipsychotics, စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့် anxiolytics ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးသုံး cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ Frost က, Cerceo, ကာရိုးနှင့် Kolb (2009) လူသားများတွင်သန္ဓေသား (postnatal ရက်ပေါင်း 3-10) သို့မဟုတ်သန္ဓေသားနှင့်အစောပိုင်းကလေးဘဝ (postnatal ရက်ပေါင်း 3-20) အဆင့်မှသက်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်မှာ paradigmatic typical- (haloperidol) သို့မဟုတ် atypical (olanzapine) နဲ့ antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများကုသအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် dendritic ဗိသုကာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ medial prefrontal နှင့် Orbital cortex နှစ်ဦးစလုံးအတွက် dendritic အရှည်လျှော့ချ, dendritic စိမျးရှုပ်ထွေးနှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြွက်သုံးပြီးနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုအတွက်စာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်အဖြစ် PFC-related neuropsychological တာဝန်များကိုအတွက်ချို့ယွင်းပြသခဲ့သည်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအပြိုင် set ကိုငါတို့သည် (ကြွက်များတွင် diazepam သို့မဟုတ် fluoxetine မှကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာကြည့်Kolb, Gibb, Pearce, & Tanguay, 2008) ။ နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထိခိုက်စေပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်နည်းလမ်း။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် diazepam အဆိုပါ parietal cortex အတွက်ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ dendritic အရှည်နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်နှင့်ဤတိုးမြှင်ကျွမ်းကျင်မော်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, fluoxetine dendritic အစီအမံလျော့နည်းသွားနှင့်ဤလူကြီးအတွက်ချို့ယွင်း Spatial သင်ယူမှုလိုငွေပြမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။
တဦးတည်းနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကို psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများစောစောထိတွေ့မှုနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာ၌ဦးနှောက် plasticity ပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါ, ဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အရင်က (လျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်စိတ်ကြွဆေး, ကင်း, ဒါမှမဟုတ်နီကိုတင်းပေးထားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာရှုပ်ထွေး enviroments မှာနေရာချ, အာရုံခံ plasticity ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးHamilton က & Kolb, 2005; Kolb, Gorny, Samaha, & ရော်ဘင်ဆင်, 2003b) ။ တစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့လူငယ်ကြွက် methylphenidate ပေးခဲ့တယ်, ပြီးတော့လူကြီးငါတို့သည်ရှုပ်ထွေး enviroments မှာဒီတိရစ္ဆာန်နေရာချခြင်းနှင့်တစ်ကြိမ်နောက်တစ်ကြိမ်ကျနော်တို့အစောပိုင်းမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု (ထို cortex အတွက်မျှော်မှန်းထားသည်အတွေ့အကြုံကို-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကိုပိတ်ဆို့တွေ့ရှိခဲ့Comeau & Kolb, 2011) ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအပြိုင်လေ့လာမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူငယ် methylphenidate ထိတွေ့ prefrontal လုပ်ငန်းဆောင်တာမှအထိခိုက်မခံ neuropsychological တာဝန်များကိုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ပေါင်းလဒ်ခုနှစ်, အလွဲသုံးစားမှုဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးနှစ်ဦးစလုံးမှထိတွေ့မှု prefrontal ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် prefrontal-related အပြုအမူတွေအပေါ်အများကြီးအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုရှည်လျားတည်မြဲသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်လာများနှင့်လူကြီးအတွက်ဦးနှောက် plasticity သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ဦးနှောက်နှင့်အမူအကျင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏မျှော်လင့်မထားတဲ့လေးနက်သက်ရောက်မှုလူ့မွေးကင်းစကလေးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ခြောအရေးကြီးလှသည်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနက်စိတ်ကျရောဂါ, စိတ္တ, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်-မမှန်နှင့်အတူကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များရောဂါဗေဒ mother- ရှိပါတယ်ဤအပြုအမူအခြေအနေများကလေးငယ်ကိုအတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းပေးထားသောနှင့်အထူးသဖြင့်အတိုင်းအတာအထိဆေးဝါးများသတ်မှတ်ထားသောရပါမည်ရှိမရှိအပေါ်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောခေါ်ဆိုခမဟုတ်ပါဘူး မွေးကင်းစကလေး interaction က။ အဆိုပါသုတေသနရိုးရှင်းစွာအပျော့စားစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူမိခင်များအပေါ်သူတို့၏ "ငြိမ်သက်" သက်ရောက်မှုများအတွက်အသုံးပြုလျက်နှင့်မနိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများအဖြစ်အနိမ့်တစ်ဦးထိရောက်သောထိုးများတွင်အသုံးပြုသင့်ကြောင်း, သို့သော်, အကြံပြုပါဘူး။
3 ။ Gonadal ဟော်မုန်း
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း gonadal ဟော်မုန်းထိတွေ့၏အထင်ရှားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုမွေးဖွားမီကစတင်ခဲ့သည်ကြောင့်လိင်အင်္ဂါ၏ကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အမျိုးသားများအားဖြင့် testosterone ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုအထီးမအင်္ဂါများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သည်။ နောက်ပိုင်းအသက်တာ၌, အီစရိုဂျင်နှင့် testosterone ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးလုံးဦးနှောက်အပါအဝင်ခန္ဓာကိုယ်ဒေသအများအပြားတွင် receptors, အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ MRI လေ့လာမှုများ (နှစ်ခုလေ့လာခြင်းအတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသကြO'Hare & Sowell, 2008) ။ အထူးသ, ဦးနှောက်၏စုစုပေါင်းအသံအတိုးအကျယ်အသီးသီးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်အသက်အရွယ် 11 နှင့် 15 န်းကျင်အမျိုးသမီးအတွက် asymptote ရောက်ရှိ။ သို့သော်ရငျ့၏နှုန်းထက်ဦးနှောက်ထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ဖို့ပိုရှိပါတယ်။ ဥပမာ, Kolb နှင့် Stewart က (1991) အဆိုပါ mPFC အတွက်အာရုံခံယောက်ျားအတွက်ပိုကြီး dendritic လယ်ကွင်းနှင့် OFC အတွက်အာရုံခံအမျိုးသမီးအတွက်ပိုကြီးတဲ့ဆဲလ်တွေရှိခဲ့ကွောငျးကြွက်များတွင်ပြသသည်။ တိရစ္ဆာန်များမွေးဖွားမှာ gonadectomized အခါဤအကွဲပြားခြားနားမှုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ အလားတူပင် စတိန်း et al ။ (2001) ကျန်းမာသန်စွမ်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဘာသာရပ်များ၏ MRI Scan ဖတ်ကနေ 45 ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ကိုတိုင်းဒေသကြီးများ၏ပမာဏ၏တစ်ဦးပြည့်စုံအကဲဖြတ်ကိုပြု၏။ အဲဒီမှာစုစုပေါင်းနှောက်အသံအတိုးအကျယ်မှဆွေမျိုး volume ထဲမှာလိင်ကွဲပြားမှု, ခဲ့ကြသည်, ဤ PFC အတွက်အထူးသဖြင့်စစ်မှန်တဲ့ခဲ့: အထီး OFC တစ်အတော်လေးပိုကြီးတဲ့အသံအတိုးအကျယ်ခဲ့သော်လည်းအမျိုးသမီး dorsolateral PFC တစ်အတော်လေးပိုကြီးတဲ့အသံအတိုးအကျယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အစောပိုင်းဘဝစဉ်အတွင်းလိင် Steroid တစ်မျိုး receptors ၏အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရှင် gonadal ဟော်မုန်း cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုးပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းလူသားများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုရှုပ်ထွေးတဲ့အိမ်ရာသို့မဟုတ် psychomotor စိတ်ကြွဆေးမှထိတွေ့မှုကဲ့သို့သောအခြားအတွေ့အကြုံများ၏ဆိုးကျိုးများလည်းလိင် dimorphic ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါဟာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများအမှန်တကယ်ဒီနှိုင်းယှဉ်ရာ၌ခန့်ထားပြီဖြစ်သော်လည်းများစွာသောအခြားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ differential, အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားဦးနှောက်ပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါဖွယ်ရှိပုံရသည်။
4 ။ မိဘကလေးဆက်ဆံရေး
တစ်ဦးနုပြည်နယ်မှာမွေးဖွားဖြစ်ကြောင်းနို့တိုက်သတ္တဝါတွေကမွေးကင်းစအစောပိုင်းအသက်တာ၌သိသိသာသာစိန်ခေါ်မှုရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိဘအပျေါမှီခိုဖြစ်ကြပြီးသူတို့က, ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သတိရ, သူတို့၏စောင့်ရှောက်သူများပိုနှစ်သက်ဖို့သင်ယူရပါမည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ငယ်ရွယ်တိရိစ္ဆာန်များ (နှင့်ပင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိရိစ္ဆာန်များ) ယခင်ကအသိအမှတ်ပြုထက်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် (နေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါကွောငျးသိရပေမယ့် Hofer & Sullivan, 2008), မိဘကလေးဆက်ဆံရေးအရေးပါဖြစ်ကြပြီးသူတို့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကြောင်းကိုနည်းနည်းသံသယရှိပါတယ်။ အစောပိုင်းမိခင်-မွေးကင်းစကလေး interaction က၏ပုံစံအတွက်ကွာခြားချက်များ (လူကြီးသို့ဆက်လက်ရှိကြောင်းရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအစပျိုးနိုင်ပါတယ်Myers, Brunelli, Squire, Shindledecker, & Hofer, 1989) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်လေ့လာမှုများ, အချိန်ကိုအဆက်အသွယ်သုံးစွဲကြောင်းမိခင်ကိုလျက်ဖြီးလိမ်းပုံ၏ပမာဏပြသကြနှင့်မိခင်များတစ်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော် High-arched ကျိန်းဝပ်အနေအထားအတွက်သုံးဖြုန်းအချိန်ကို somatic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကွဲပြားမှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပတျသကျ။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် Meaney နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် (ဥပမာကျော် ကင်မရွန် et al ။ , 2005) ဒီကြွက်မိခင်-မွေးကင်းစကလေး interaction ကစနစ်တကျ hypothalamic-adrenal စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်လူကြီးအတွက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုအပြုအမူတွေအမျိုးမျိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြုပြင်မွမ်းမံကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဤအပြောင်းအလဲများ (အလှည့်အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများထိန်းချုပ်ထားသည့် hippocampal ဆဲလ်အမြှေးပါး corticosterone receptors အတွက်အပြောင်းအလဲဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်ရက်ကန်း et al ။ , 2006).
မိခင်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အမျိုးကွဲများ၏သက်ရောက်မှုသို့သော် hippocampus ဖို့ကန့်သတ်မထားပါနှင့်အတော်လေးကျယ်ပြန့်နေပေမည်။ ဥပမာ, Fenoglio Chen နှင့် Barum (2006) (စနေဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှုအသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးအပတ်အတွင်းတိုးမြှင့်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုအတွက် hypothalamus နှင့် amgydala အတွက်လမ်းကြောင်းအချက်ပြဆဲလ်ထဲမှာမွဲအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းပြသကြ Fenoglio, Bruson, & Barum, 2006).
ကျွန်တော်တို့သည်မိခင်-မွေးကင်းစကလေး interaction ကအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုတုံ့ပြန် plasticity neocortical မှာရှာဖွေနေအလားတူလေ့လာမှုများမသိ, အထူးသဖြင့် prefrontal ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေဖွယ်ရှိပုံရသည်။ ကျနော်တို့အတွက်မိခင်-မွေးကင်းစကလေး interaction ကတိုးမြှင့်ဖို့သုံးခဲ့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည့်ဥပမာ, ကြောင်းနေ့စဉ်မိခင်ခွဲခြာ, ပြသကြ Fenoglio et al ။ (2006) လေ့လာမှု, အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် mPFC နှင့် OFC နှစ်ဦးစလုံးအတွက် dendritic အရှည်နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ပေ (မိုဟာမက် & Kolb, 2011).
5 ။ ရွယ်တူချင်းဆက်ဆံရေး
ရွယ်တူချင်းဆက်ဆံရေးကို, ဥပမာ (Harlow ၏လေ့လာမှုများကတည်းကအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများပြီ Harlow & Harlow, 1965) ။ အာဏာအရှိဆုံးသက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာအရွယ်ရောက်လူမှုရေးအရည်အချင်းကို (ဥပမာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ပြထားပြီးဖြစ်သောကစားသည်, Pellis & Pellis, 2010) ။ အဆိုပါတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကစားအပြုအမူအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ (ဥပမာထဲမှာသော်လည်း mPFC နှင့် OFC အပေးအယူကစားအပြုအမူတစ်ခုမွေးကင်းစကလေးဒဏ်ရာ, Pellis et al ။ , 2006) ။ ထိုကဲ့သို့သောရလဒ်များအမြင်တှငျကြှနျုပျတို့ကစားအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အသုံးချခံခဲ့ရလျှင်နှစ်ခု prefrontal ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းဆောင်တာ, differential ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုတွေးဆ။ Juvenile ကြွက်အရှင် 1 သို့မဟုတ်3အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များနှင့်အတူသို့မဟုတ် 1 သို့မဟုတ်3သည်အခြားလူငယ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူဆော့ကစားရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူခဲ့သည်။ အဲဒီမှာအရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူနီးပါးမျှကစားခဲ့ပေမယ့်အပြုအမူစည်းဝေးသောပိုလူငယ်တိရိစ္ဆာန်များတိုးပွားလာခဲ့သည်ကစား။ အဆိုပါ PFC အတွက်ဆဲလ် analysis mPFC ၏အာရုံခံကစားပမာဏကိုသော်လည်းမ conspecifics ၏နံပါတ် (တုန့်ပြန်သော်လည်းယင်း OFC ၏အာရုံခံမဟုတ်, ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကစားဖြစ်စေမ, ပစ္စုပ္ပန်ရွယ်တူများ၏အရေအတွက်တုံ့ပြန်ကြောင်းပြသဘဲလ်, Pellis, & Kolb, 2010) ။ ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းတွင်အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများအမျိုးမျိုးကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု, postnatal ထိတွေ့နိုင်သောဆွနှင့် methylphenidate မှလူငယ်ထိတွေ့မှု (ဥပမာအပါအဝင်ကြွက်ကစားအပြုအမူပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုစီးရီးမှာပြခဲ့ကြ မိုဟာမက်, Hossain, Pellis, & Kolb, 2011) နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအမှု၌, prefrontal ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မူမမှန်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (ADHD) ၌ရှိသကဲ့သို့လူ့ကလေးဘဝကစားပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများ, ဆင်ခြင်သောအခါကဒီမှာအရေးပါသောသင်ခန်းစာရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ကစားအပြုအမူအတွက်မူမမှန် prefrontal ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
6 ။ အစောပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှု
အဲဒီမှာလူကြီးများအတွက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖေါ်ပြခြင်းအတိတ် 60 နှစ်အတွင်းစုဆောင်းကြီးမားစာပေဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်မွေးကင်းစအတွက် perinatal စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုတန်ဖိုးထားထားပြီးသာပိုပြီးမကြာသေးမီကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယခုကိုယ်ဝန်နှင့်မွေးကင်းစကလေးနှစ်ဦးစလုံးစိတ်ဖိစီး maladaptive အပြုအမူတွေနဲ့ psychopathologies အမျိုးမျိုးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ predisposes ကြောင်းလူသိများသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုဟာအန္တရာယ် schizophrenia များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အချက်, ADHD, စိတ်ကျရောဂါနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ (ဖြစ်ပါတယ်Anda et al ။ , 2006; ဗန် den Bergh & Marcoen, 2004) ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူစမ်းသပ်လေ့လာမှုများခြုံငုံရလဒ်များကိုကြွက်ကဲ့သို့ non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက် perinatal စိတ်ဖိစီးမှု, ထိုကဲ့သို့သောတိုးမြှင်နှင့်တာရှညျစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, ချို့ယွင်းသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်အပြုအမူမူမမှန်, အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်လိုငွေပြမှု, ပြောင်းလဲရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဤအတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါပြီ အပြုအမူ, လူမှုရေးပြောင်းလဲနှင့်အပြုအမူ play နှင့်အရက်တစ်ခုတိုးလာ preference ကို (အားဖြင့်ဥပမာပြန်လည်သုံးသပ် Weinstock, 2008).
perinatally-အလေးပေးတိရစ္ဆာန်များ၏ဦးနှောက်၏ Synaptic အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအဆိုပါပလပ်စတစ်ပြောင်းလဲမှုများကိုလျော့နည်းကောင်းစွာသို့သော်လေ့လာခဲ့ပြီးလျှင်, သက်ရောက်မှုများဖိစီးမှုအတှေ့အကွုံအသေးစိတ်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ပေါ်လာကြသည်။ ဥပမာ, Murmu et al ။ (2006) ကိုယ်ဝန်၏တတိယပတ်အတွင်းအလယ်အလတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုဟာ mPFC နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ degus ၏ OFC နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လျော့နည်းသွားကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် dendritic အရှည်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မတူတာကတော့, Muhammad & Kolb (၂၀၁၁) ကိုယ်ဝန်၏ဒုတိယအပတ်အတွင်းပျော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု mPFC အတွက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွားပေမယ့် OFC အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏ NACC အတွက်တိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆမျှရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ mPFC နှင့် NACC အတွက် dendritic အရှည်တစ်ခုတိုးလာပေမယ့် OFC အတွက်ကျဆင်းခြင်းရှိခဲ့သည်အဖြစ် dendritic အရှည်၏ analysis တခုအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံပြသခဲ့သည်။ သေအချာ, Mychasiuk, Gibbs နှင့် Kolb (2011) ဦးနှောက်မဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များထက်လူငယ်အတွက်လေ့လာခဲ့ကြသည်အခါဒုတိယကိုယ်ဝန်ပတ်အတွင်းပျော့စိတ်ဖိစီးမှု mPFC နှင့် OFC နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည်ဤလေ့လာမှုများကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အသက်အရွယ်၏အချိန်ကိုက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဦးနှောက်အာရုံကြောဆဲလ်ဆားကစ်အတွက်ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုအသီးသီးအတွက်ရလဒ်ဆန်းစစ်သောအချိန်ကဖော်ပြသည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ, သို့သော်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ဖိစီးမှုသူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပေါ်လာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဥပမာ, Liston et al ။ (2006) ပထမဦးဆုံးအအရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ဖိစီးမှု mPFC အတွက် dendritic အကိုင်းနှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းပေမယ် OFC တစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဦးနှောက်အတွက် Synaptic အဖွဲ့အစည်းကစောစော postnatal စိတ်ဖိစီးမှု (မိခင်ခွဲခြာ) ၏သက်ရောက်မှုမှာရှာဖွေနေတစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုသတိထားဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်, Muhammad & Kolb (၂၀၁၁) မိခင်ခွဲခြာအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် mPFC, OFC နှင့် NACC အတွက်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်နို့စို့သူငယ်ဖြစ်စေစိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူးဖြစ်ပါတယ် Synaptic အပြောင်းအလဲများတွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုနောက်ပိုင်းတွင်အပြုအမူသို့မဟုတ်ဘယ်လိုပလပ်စတစ်အဆိုပါအာရုံခံထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးအိုးအိမ်, ပြဇာတ်, ဒါမှမဟုတ်မွေးကင်းစကလေးမိဘဆက်ဆံရေးကဲ့သို့အခြားအတွေ့အကြုံများမှတုန့်ပြန်ပါလိမ့်မည်ဆက်စပ်ပုံဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများအနာဂတ်လေ့လာချက်များ၏ grist ဖြစ်သေချာပါသည်။
7 ။ အူလမ်းကြောင်းသစ်ပင်ပန်းမန်
ထိုခဏခြင်းတွင်ဘွားမြင်သောနောက်, နို့တိုက်သတ္တဝါများလျှင်မြန်စွာဌာနေပိုးမွှားအမျိုးမျိုးဖြင့်လူနေထူထပ်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားပိုးမွှားအများအပြားခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုး။ ဥပမာအားဖြင့်, အူ microbiota ဥပမာ (အသည်း function ကိုအပေါ်စနစ်တကျသက်ရောက်မှုရှိသည်, Björkholm et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါ perinatal ကာလ (ဥပမာစဉ်အတွင်းထိုကဲ့သို့အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့် schizophrenia နဲ့ microbioal ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအဖြစ် neurodevelopmental မမှန်အကြားလူသိများစပ်လျဉ်းလည်းမရှိသောကြောင့် Finegold et al ။ , 2002; Mittal, Ellman, & Cannon, 2008), Diaz Heijtz et al ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) ထိုကဲ့သို့သောရောဂါကူးစက်မှုဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်လျှင်အံ့ဩကြ၏။ သူတို့ကလုပ်ပါ။ အဆိုပါစာရေးဆရာများနှင့်အတူသို့မဟုတ်သာမန်အူ mircrobiota မပါဘဲဖွံ့ဖြိုးကြောင်းကြွက်များတွင်မော်တာအပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်နှစ်ဦးစလုံး၏အတိုင်းအတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အဆိုပါစာရေးဆရာအူဘက်တီးရီးယားကြွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲထဲမှာ cortex နဲ့ striatum အတွက်အချက်ပြလမ်းကြောင်း, neurotransmitter လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှင့် Synaptic-related ပရိုတိန်းများထုတ်လုပ်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုမော်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကဖှံ့ဖွိုးတိုးတနေစဉ်အတွင်းရောဂါကူးစက်မှုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမူအကျင့်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သောလမ်းသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်။
8 ။ အစားအသောက်
ပရိုတိန်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကယ်လိုရီကန့်သတ်အစားအစာ (ဥပမာ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်ကျယ်ပြန့်စာပေရှိပါသည် Lewis က, 1990) ဒါပေမယ့်အများကြီးလျော့နည်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်တိုးမြှင့်အစားအစာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်ကဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဗီတာမင်နှင့် / သို့မဟုတ်ဓာတ်သတ္တုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် facilitated စေခြင်းငှါခန့်မှန်းဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းသောအစာအာဟာရပေးသောအခါခန္ဓာကိုယ်ပိုကောင်းတို့၏ရောဂါကိုငြိမ်းကြောင်းယူဆနေသည်။ အဆိုပါ perinatal ကာလအတွင်းအစားအသောက် choline ဖြည့်စွက် (နှစ်ဦးစလုံးအပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်မှစသောအပြောင်းအလဲအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်Meck & Williams, 2003) ။ ဥပမာအားဖြင့်, perinatal choline ဖြည့်စွက်အမျိုးမျိုးသော Spatial အညွှန်းစမ်းသပ်မှု (ဥပမာအတွက်တိုးမြှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်မှဦးဆောင်, Meck & Williams, 2003; Tees, & Mohammadi, 1999) နှင့် hippocampus နှင့် neocortex (ဥပမာအတွက်တွင် nerve growth factor (NGF) ၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွါး, Sandstrom, Loy, & Williams က, 2002). Halliwell, Tees နှင့် Kolb (2011) အလားတူလေ့လာမှုများပြု choline ဖြည့်စွက်နှောက် cortex တလွှားနှင့် hippocampal CA1 ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက် dendritic အရှည်တိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Halliwell (2011) ဒါ့အပြင်နို့တိုက်ကြွက်အစာအဟာရတစ်ခုဗီတာမင် / တွင်းထွက်ပစ္စည်းဖြည့်စွက်၏ထို့အပြင်များ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သူမသည် (အမျိုးမျိုးသောရောဂါများနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ခံစားချက်နှင့်ကျူးကျော်တိုးတက်စေရန်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တဲ့အစားအစာဖြည့်စွက်သုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြခဲ့Leung, Wiens & Kaplan, 2011) နှင့်အလိုအလျောက်တစ်ခုတိုးနှင့်အတူအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်အမျက်ဒေါသ, လှုပ်ရှားမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်လူမှုရေးဆုတ်ခွာလျော့နည်းသွား (Mehl-Madrona, Leung, Kennedy, Paul & Kaplan, 2010) ။ နို့တိုက်ကြွက်များ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးအနွယ်၏ analysis အတူတူဖြည့်စွက် mPFC အတွက်အာရုံခံအတွက် dendritic အရှည်နှင့် parietal cortex အတွက်မဟုတ် OFC တစ်ခုတိုးလာကိုတွေ့ကျွေးမွေး၏။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အစားအသောက်များတွင် OFC အတွက် dendritic အရှည်၏လျှော့ချရေးအပေါ်ပျော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနောက်ပြန်ဆုတ်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
အများကြီးအာရုံခံကွန်ရက်များနှင့်အပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အစားအသောက်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်နှစ်ဦးစလုံး၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခံရဖို့ကျန်ရစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပြောင်းလဲပြုပါပေမယ့်ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးသည်အခြားအချက်များအများအပြား၌ရှိသကဲ့သို့, ငါတို့အစောပိုင်းအတွေ့အကြုံများကိုဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်ရန်, ထိုကဲ့သို့သော psychoactive မူးယစ်ဆေးအဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူအပြန်အလှန်လိမ့်မယ်မည်သို့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုမရှိကြပါဘူး။
ပုံမှန်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏သဘောသဘာဝ၏ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုအတိတ် 30 နှစ်ပေါင်း၌ရှည်လျားသောလမ်းချီတက်လျက်ရှိသည်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း modulate သောအချက်များအချို့ကိုနားလည်ရန်စတင်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို neurodevelopmental မမှန်များ၏ပဟေဠိပျက်ပြယ်စတင်ရန်နှင့်ရောဂါဗေဒအပြောင်းအလဲများကိုပိတ်ဆို့သို့မဟုတ် reverse စောစောကုသစတင်ရန်အဘို့ဤမော်ဂျူနားလည်ခြင်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ခုသိသာရှုပ်ထွေးအတွေ့အကြုံများအနည်းကိန်းဖြစ်ရပ်များမဟုတ်ပေမယ့်အစားကျနော်တို့ဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားအဖြစ်, အတွေ့အကြုံများတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမကြာခဏ metaplasticity အဖြစ်ရည်ညွှန်း, အပြုအမူများနှင့်ဦးနှောက်နှစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အပြန်အလှန်။ ဖြစ်ပါသည်
ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံကို-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းကတစ်ခုတည်းအချိန်ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအဖြစ်ကျနော်တို့ကို "ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်" ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာသိသာတဲ့ဒါမဟုတျပါဘူးနှင့်အခြားအချိန်များတွင်ထက်တုံ့ပြန်မှုကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်ကိုပို (ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း) ဖြစ်သည့်အတွက်အချိန်ဝေဖန်ပြတင်းပေါက်ရှိပါတယ်ကွောငျးတှေ့မညျဖွစျကွောငျးနည်းနည်းသံသယရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောနှောက်ဒေသများကွဲပြားခြားနားသောအရေးပါပြတင်းပေါက်ပြလတံ့သောဖွယ်ရှိသည်။ ယင်းမော်တာ cortex အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးဒဏ်ရာရလျှင်နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (မှာအတူတူပင်ဒဏ်ရာဆွေမျိုးဆင်းရဲသားရလဒ်ကိုရှိကွောငျး, ဥပမာ, ကျနော်တို့တွေ့ကြပြီNemati & Kolb, 2010) ။ သေအချာသို့သော်ပြောင်းပြန်ဟာ prefrontal cortex မှဒဏ်ရာများအတွက်မှန်သည်။ အဆိုပါ areal-မှီခိုအရေးပါပြတင်းပေါက်ကို sorting လာမည့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ Synaptic plasticity ၏အစီအမံအပေါ်ကဒီမှာအာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြပေမယ့်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများကိုများစွာသောအခြားအဆင့်ကိုလေ့လာနိုင်အသိအမှတ်ပြုရန်။ နောက်ဆုံးတွင် Synaptic ပြောင်းလဲမှု၏အခြေခံယန္တရားမျိုးဗီဇစကားရပ်၌တှေ့ရလိမျ့မညျ။ အဆိုပါအခက်အခဲကြောင့်အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံများသိသိသာသာများစွာသို့မဟုတ်ဗီဇရာပေါင်းများစွာပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောမည်ဖွယ်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစိန်ခေါ်မှုအရှိဆုံးအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာအပြုအမူအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဆက်နွယ်သောအပြောင်းအလဲခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးစီးပွား၏ကျေးဇူးတင်လွှာ / ပဋိပက္ခများ
ငါတို့သည်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဆှေးနှေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာမှုများအဘို့မိမိတို့ရေရှည်ထောက်ခံမှုများအတွက် NSERC နှင့် CIHR နှစ်ဦးစလုံးကျေးဇူးတင်ဖို့အလိုရှိ၏။ ကျနော်တို့ကိုလည်းလေ့လာမှုများ၎င်းတို့၏အများအပြားပံ့ပိုးမှုများကို Cathy ကာရိုး, Wendy Comeau, Dawn Danka, Grazyna Gorny, Celeste Halliwell, Richelle Mychasiuk, Arif မိုဟာမက်နှင့် Kehe Xie ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Anda RF, Felitti VJ, Bremner JD, Walker က JD, Whitfield ကို C, ပယ်ရီ bd, Giles WH ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်ဆိုးရွားသောအတွေ့အကြုံများများ၏တည်မြဲဆိုးကျိုးများ။ neurobiology နှင့်ရောဂါကနေသက်သေအထောက်အထားတစ်ခု convergence ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပမော်ကွန်း။ 2006; 256: 174-186 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အဆိုပါကျောရိုးထဲမှာ Baranauskas G. အနာကျင်မှု-သွေးဆောင် plasticity ။ ခုနှစ်တွင်: Shaw, CA, McEachern J ကို, အယ်ဒီတာများ။ Neuroplasticity တစ်သီအိုရီဆီသို့။ Philadelphia တွင်, PA: စိတ်ပညာစာနယ်ဇင်း; 2001 ။ စစ။ 373-386 ။
ခေါင်းလောင်း HC, Pellis သည် SM, Kolb ခ Juvenile သက်တူရွယ်တူကစားအတွေ့အကြုံများနှင့် orbitofrontal နှင့် medial prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2010; 207: 7-13 ။ [PubMed]
Black က je, Kodish ထားတဲ့ IM, မမေ့ဘူး AW, Klintsova AY, Orlovskaya: D, Vostrikov V ကို, Greenough WT ။ schizophrenia နှင့်အတူလူနာများ၏ prefrontal cortex အတွက်အလွှာ V ကိုပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ၏ရောဂါဗေဒ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2004; 161: 742-744 ။ [PubMed]
Blumberg က MS, Freeman က JH, ရော်ဘင်ဆင် SR ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်မှ neuroscience များအတွက်အသစ်နယ်စပ်။ ခုနှစ်တွင်: Blumberg က MS, Freeman က JH, ရော်ဘင်ဆင် SR, အယ်ဒီတာများ။ Developmental အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ၏အောက်စဖို့လက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2010 ။ စစ။ 1-6 ။
Björkholm B, Bok CM, Lundin တစ်ဦးက, တံကျင် J ကို, Hibberd ML, ကို Pettersson အက်စ်အူ microbiota အသည်းထဲမှာ xenobiotic ဇီဝြဖစ်ထိန်းညှိ။ PLoS ONE ။ 2009; 4: e6958 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကင်မရွန်မိုင်, ရှန်ပိန်အက်ဖ်အေ, Carine P ကို, ငါး EW, Ozaki-Kuroda K ကို Meaney အမ်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်မူကွဲမှတဆင့်တစ်ဦးကြွက်များတွင်ကာကွယ်ရေးတုံ့ပြန်မှုများနှင့်မျိုးပွားမှုနည်းဗျူဟာများအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏ပရိုဂရမ်းမင်း။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2005; 29: 843-865 ။ [PubMed]
Comeau W ကမိပြီ, E, medial prefrontal cortical ဒဏ်ရာအောက်ပါကြိုတင်နှင့် postnatal FGF-2 ၏ Kolb ခ Differential အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2007; 180: 18-27 ။ [PubMed]
Comeau WL, မက်ဒေါ်နယ် R ကို, prefrontal cortical circuitry အတွက် Kolb ခသင်ယူ-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2010; 214: 91-101 ။ [PubMed]
Comeau W က, လူကြီးအတွက် methylphenidate လုပ်ကွက်အကြာတွင်အတွေ့အကြုံကို-မှီခို plasticity မှ Kolb ခ Juvenile ထိတွေ့မှု။ 2011 ။ တင်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Diaz Heijtz R ကို, Kolb B, Forssberg အိပ်ချ် Pre-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းစိတ်ကြွဆေးတစ်ကုထုံးဆေးထိုးဦးနှောက်အတွက် Synaptic အဖှဲ့အစညျး၏ပုံစံကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါသလား? အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2003; 18: 3394-3399 ။ [PubMed]
Diaz Heijtz R ကို, ဝမ်က S, Anuar က F, Qian Y ကို, Björkholm B, Samuelsson တစ်ဦး, ကို Pettersson အက်စ်ပုံမှန်အူ microbiota ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အပြုအမူ modulates ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ (USA) ၏တရားစွဲဆိုမှု။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Eriksson PS, Perfi lieva အီး, Björk-Eriksson T က, Alborn လေး, Nordborg ကို C, Peterson DA, Gage FH ။ အရွယ်ရောက်သူလူ့ hippocampus အတွက် Neurogenesis ။ Nature Medicine ။ 1998; 4: 1313-1317 ။ [PubMed]
Fenoglio Ka, Brunson KL, Baram tz ။ အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင် Hippocampal neuroplasticity: Functional နှင့်မော်လီကျူးရှုထောင့်။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2006; 27: 180-192 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fenoglio Ka, ချန် Y ကို, Baram tz ။ အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏ Neuroplasticity အစောပိုင်းအသက်တာ၌စိတ်ဖိစီးမှု-ထိန်းညှိဦးနှောက်ဒေသမှုများထပ်တလဲလဲစုဆောင်းမှုလိုအပ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26: 2434-2442 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Finegold သည် SM, Molitoris: D, သီချင်း Y ကို, လျူကို C, Vaisanen ML, Bolt အီးနှောင်းပိုင်း-စတင်ခြင်းအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက် Kaul အေအစာအိမ်နှင့်အူ microflora လေ့လာမှုများ။ လက်တွေ့ကူးစက်ရောဂါ။ 2002; 35 (ပျော့ပျောင်း 1): S6-S16 ။ [PubMed]
Frost က DO, Cerceo S ကိုကာရိုးကို C, Kolb ခ Haloperidol သို့မဟုတ် Olanzapine မှအစောပိုင်းထိတွေ့ dendritic ပုံစံ၏ရေရှည်ကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သည်။ synapses ။ 2009; 64: 191-199 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gibbs R. Perinatal အတွေ့အကြုံနှင့်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကနေပြန်လည်နာလန်ထူ။ 2004 ။ အတည်မပြုရသေးသောပါရဂူဘွဲ့စာတမ်း, Lethbridge တက္ကသိုလ်, ကနေဒါ။
Gibbs R ကို, Gonzalez clr, Wegenast W က, Kolb ခထိတွေ့နိုင်သောဆွအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် cortical ဒဏ်ရာအောက်ပါပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2010; 214: 102-107 ။ [PubMed]
Giffin က F, Mitchell က DE ။ ပေါက်အတွက်အစောပိုင်း monocular ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီးနောက်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံပြန်လည်နာလန်ထူနှုန်း။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏ဂျာနယ်။ 1978; 274: 511-537 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စတိန်း JM, Seidman LJ, Horton က NJ, Makris N က, ကနေဒီ DN, Cainess VS, Tsuang MT ။ အတွက် Vivo သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တို့ကအကဲဖြတ်သက်ကြီးလူ့ဦးနှောက်၏ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2001; 11: 490-497 ။ [PubMed]
သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်အီး, Tanapat P ကိုမိပြီ NB, Shor တီဂျေ။ လူကြီးအတွက် Neurogenesis: သင်ယူမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအခန်းကဏ္ဍ။ သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1999; 3: 186-192 ။ [PubMed]
Greenough WT, Black က je, Wallace CS ။ အတွေ့အကြုံနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 1987; 22: 727-252 ။ [PubMed]
Greenough WT, Chang က FF ။ အဆိုပါနှောက် cortex အတွက် synapses ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပုံစံ၏ plasticity ။ ခုနှစ်တွင်: ပီတာတစ်ဦးက, ဂျုံးစ်ဥပမာအယ်ဒီတာများ။ ဦးနှောက် Cortex, Vol7။ နယူးယောက်, NY: Plenum စာနယ်ဇင်း; 1989 ။ စစ။ 391-440 ။
Gregg မှန် CT, Shingo T က, Weiss အက်စ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောသည့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ forebrain ၏ဆဲလ်တွေရပ်တ။ စမ်းသပ်ဇီဝဗေဒ၏ Society ရဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲ။ 2001; 53: 1-19 ။ [PubMed]
Halliwell CI ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မွေးကင်းစကလေး cortical အနာတရပြီးနောက်ကုသမှုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ 2011 ။ အတည်မပြုရသေးသောပါရဂူဘွဲ့စာတမ်း, Lethbridge တက္ကသိုလ်, ကနေဒါ။
Halliwell ကို C, Tees R ကို, Kolb ခကိုယ်ဝန်ဆောင် choline ကုသမှုကြွက်များတွင် perinatal တိုကျရိုကျဒဏ်ရာကနေပြန်လည်နာလန်ထူပိုကောင်းစေပါတယ်။ 2011 ။ တင်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Hamilton က D:, Kolb ခနီကိုတင်း, အတွေ့အကြုံနှင့်ဦးနှောက် plasticity ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005; 119: 355-365 ။ [PubMed]
Harlow HF, Harlow MK ။ ဘေးဒဏ်သင့်စနစ်များကို။ ခုနှစ်တွင်: Schier တစ်ဦးက, Harlow HF, Stollnitz က F, အယ်ဒီတာများ။ nonhuman မျောက်ဝံများ၏အပြုအမူ။ vol ။2။ နယူးယောက်, NY: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1965 ။
Hebb DO ။ အပြုအမူများအဖွဲ့။ နယူးယောက်, NY: McGraw-Hill က; 1949 ။
Hofer MA, Sullivan က RM ။ ပူးတွဲမှုတစ်ခု neurobiology ဆီသို့။ ခုနှစ်တွင်: နယ်လ်ဆင်, CA, Luciana M က, အယ်ဒီတာများ။ Developmental သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ကင်းဘရစ်, MA: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 2008 ။ စစ။ 787-806 ။
Jacobs B, Scheibel AB ။ လူသားတွေအတွက် Wernicke ဧရိယာ၏တစ်ဦးကအရေအတွက် dendritic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဗြဲသက်တမ်းအပြောင်းအလဲများကို။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ်။ 1993; 327: 383-396 ။ [PubMed]
Kempermann, G, Gage FH ။ အရွယ်ရောက်သူဦးနှောက်အဘို့အနယူးအာရုံကြောဆဲလ်တွေ။ သိပ္ပံနည်းကျအမေရိကန်။ 1999; 280 (5): 48-53 ။ [PubMed]
Kolb ခဦးနှောက် plasticity နှင့်အပြုအမူ။ Mahwah, NJ: Erlbaum; 1995 ။
Kolb B, Cioe J ကို, ကြွက်များတွင် dendritic Arbore နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအပေါ်မော်တာများနှင့်အမြင်အာရုံသင်ယူမှုအလုပ်များကို Comeau ဒဗလျူနှိုငျးယှဉျဆိုးကျိုးများ။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ၏ Neurobiology ။ 2008; 90: 295-300 ။ [PubMed]
Kolb B, Gibbs R. ထိတွေ့နိုင်သောဆွကြွက်များတွင်မွေးကင်းစကလေးများ medial တိုကျရိုကျသို့မဟုတျ posterior parietal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက် functional ဖြစ်စေ recovery နှင့် dendritic ပြောင်းလဲမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2010; 214: 115-120 ။ [PubMed]
Kolb B, Gibbs R ကို, neocortex အတွက် dendritic Arbore နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆအတွက် Gorny G. အတှေ့အကွုံ-မှီခိုအပြောင်းအလဲများကိုအသက်အရွယ်နှင့်လိင်နှင့်အတူခြားနားသည်။ သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ၏ Neurobiology ။ 2003a; 79: 1-10 ။ [PubMed]
Kolb B, Gorny, G လီ Y ကို, Samaha AN, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားသို့မဟုတ်ကင်းသည့် neocortex နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦး plasticity မြှင့်တင်ရန်အကြာတွင်အတွေ့အကြုံကိုများ၏စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ (USA) 2003b ၏တရားစွဲဆိုမှု; 100: 10523-10528 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kolb B, Gibbs R ကို, Pearce က S, ဆေးညွှန်းဆေးဝါးများမှ Tanguay R. ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ထိတွေ့ကြွက်များတွင်အစောပိုင်းဦးနှောက်ဒဏ်ရာအောက်ပါပြန်လည်နာလန်ထူပွောငျးလဲ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ abstraction များအတွက် Society က။ 2008; 349:5။
Kolb B, Morshead ကို C, Gonzalez ကို C, Kim က N ကို, Shingo T ကအသစ် cortical တစ်ရှူးများနှင့်ကြွက်များ၏မော်တာ cortex ဖို့လေဖြတ်ခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက် functional ဖြစ်စေပြန်လည်နာလန်ထူ၏ Weiss အက်စ်ကြီးထွားအချက်-နှိုးဆွမျိုးဆက်။ ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ဇီဝြဖစ်၏ဂျာနယ်။ 2007; 27: 983-997 ။ [PubMed]
Kolb B က, ကြွက်များ၏ prefrontal cortex အတွက်ဆဲလ် dendritic အကိုင်းအတွက် Stewart ကဂျေလိင်-related ကွဲပြားခြားနားမှု။ Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ်။ 1991; 3: 95-99 ။ [PubMed]
Kolb B, Whishaw အိုင်ကျူ။ လူ့ Neuropsychology ၏အခြေခံ။ 6th ထုတ်ဝေ။ နယူးယောက်, NY: Worth; 2009 ။
Leung BM, Wiens KP, Kaplan BJ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အာဟာရပြည့်ဖြည့်စွက်သားသမီးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တိုးတက်စေသလား တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ BCM ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကလေးမွေးဖွား။ 2011; 11: 1-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lewis က PD ။ အာဟာရနှင့်ဦးနှောက်၏ခန္ဓာဗေဒဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ခုနှစ်တွင်: ဗန် Gelder မိုင်, Butterworth RF, Drujan bd, အယ်ဒီတာများ။ (တှကေအသငျ့) အာဟာရနှင့်မွေးကင်းစကလေးဦးနှောက်။ နယူးယောက်, NY: Wiley-Liss; 1990 ။ စစ။ 89-109 ။
Liston ကို C, Miller က MM, Godwater DS, Radley JJ, Rocher AB, Hof PR စနစ်, McEwen BS ။ prefrontal cortical dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲသိမှုဆိုင်ရာအာရုံအာရုံစူးစိုက်မှုအစုပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်အတွက်ရွေးချယ်ချို့ယွင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26: 7870-7874 ။ [PubMed]
Mattson အမတ်, Duane W က, ချမ်း SL, Guo Z. ခုနှစ်တွင်: Neuroplasticity တစ်သီအိုရီခါနီး။ Shaw, CA, McEachern J ကို, အယ်ဒီတာများ။ Philadelphia တွင်, PA: စိတ်ပညာစာနယ်ဇင်း; 2001 ။ စစ။ 402-426 ။
Meck WH, Williams က CL ။ ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်း၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုအားဖြင့် choline ၏ဇီဝဖြစ်စဉ် Imprint: အသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2003; 27: 385-399 ။ [PubMed]
Mehl-Madrona L ကို, Leung B က, ကနေဒီကို C, ပေါလုက S, Kaplan BJ ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်စံဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုသာရှိပြီးပြည်ပမှအာဟာရပြည့်: တစ်ဦးကသဘာဝအမှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှု။ ကလေးဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်။ 2010; 20: 95-103 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မစ်တယ်လ် VA သို့, Ellman LM, Cannon TD ။ schizophrenia အတွက်မျိုးဗီဇ-ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်နှင့် covariation: သားဖွါးပြဿနာများ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Schizophrenia သတင်းလွှာ။ 2008; 34: 1083-1094 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မိုဟာမက်တစ်ဦးက, Hossain က S နဲ့, Pellis S က, ဖွံ့ဖြိုးရေးစဉ်အတွင်း Kolb ခထိတွေ့နိုင်သောဆွစိတ်ကြွဆေးာင်း attenuates နှင့်အာရုံခံ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2011; 125: 161-174 ။ [PubMed]
မိုဟာမက်တစ်ဦးက, Kolb ခအပျော့စားကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ကြွဆေးာင်းထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲအပြုအမူနှင့်အာရုံခံကျောရိုးသိပ်သည်းဆ modulates ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်) Developmental အာရုံကြောသိပ္ပံ။ [PubMed]
မိုဟာမက်တစ်ဦးက, Kolb ခမိခင်ခွဲခြာစိတ်ကြွဆေးာင်းလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိဘဲအပြုအမူနှင့်အာရုံခံကျောရိုးသိပ်သည်းဆပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အမူအကျင့်ဦးနှောက်သုတေသန။ 2011; 223: 7-16 ။ [PubMed]
Murmu M က, ဆော်လမွန်က S, Biala Y ကို, Weinstock M က, Braun K ကို Bock ဂျေအပြောင်းအလဲများကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် dendritic ရှုပ်ထွေးအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မိခင်များ၏သားစဉ်မြေးဆက်အတွက် prefrontal cortex ၌တည်၏။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2006; 24: 1477-1487 ။ [PubMed]
Mychasiuk R ကို, Gibbs R ကို, Kolb ခကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကြည့်ရှုနေသူစိတ်ဖိစီးမှုကြွက်သားစဉ်မြေးဆက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ prefrontal cortex နဲ့ hippocampus အတွက် neuroanatomical အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်သည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2011; 1412: 55-62 ။ [PubMed]
Myers MM, Brunelli လုပ် SA, Squire JM, Shindledecker R ကို, Hofer MA ။ အမျိုးအနွယ်ကိုသွေးပေါင်ချိန်ရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးအတွက် SHR ကြွက်၏မိခင်အပြုအမူ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 1989; 22: 29-53 ။ [PubMed]
Nemati က F, Kolb ခမော်တော် cortex ဒဏ်ရာလူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်များနှင့်ခန္ဓာဗေဒသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2010; 24: 612-622 ။ [PubMed]
အိုဟဲ ED, Sowell ER ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာမီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူအမှု၌ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို Imaging ။ ခုနှစ်တွင်: နယ်လ်ဆင်, CA, Luciana M က, အယ်ဒီတာများ။ Developmental သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ကင်းဘရစ်, MA: MIT ကစာနယ်ဇင်း; 2008 ။ စစ။ 23-38 ။
Pellis သည် SM မိပြီ, E, Takeshi T က, Kamitakahara H ကို, Komorowska J ကို, Forgie ML, Kolb ခကစား Non-ပျြောလူမှုရေးအခင်းအကျင်းအတွက်ကြွက်များအားဖြင့်ခုခံကာကွယ်တုံ့ပြန်မှုများ၏မော်ဂျူအပေါ် Orbital တိုကျရိုကျ cortex ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏သက်ရောက်မှုများ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2006; 120: 72-84 ။ [PubMed]
Pellis S က, Pellis V. အဆိုပါ Play ဦးနှောက်။ နယူးယောက်, NY: Oneworld ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း; 2010 ။
Prusky GT ကို, Silver, bd, Tschetter WW, Alam မိုင်, ဒေါက်ဂလပ် RM ။ မျက်စိဖွင့်ပွဲအနေဖြင့်အတွေ့အကြုံ-မှီခို plasticity ရွေ့လျားမှုဗျာဒိတ်ရူပါရုံတည်မြဲ, အမြင်အာရုံ Cortex-မှီခိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2008; 28: 9817-9827 ။ [PubMed]
Raison ကို C, Capuron L ကို, Miller က AH ။ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏ pathogenesis: Cytokines ဟာဘလူးမနာသီချင်းဆိုမည်။ ရောဂါပြီးပညာအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2006; 27: 24-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rampon ကို C, Jiang CH သည် Dong H ကို, တန် YP, Lockart DJ သမား, Schultz PG, ဦးနှောက်ထဲမှာမျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်၏ဟူ Y. အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ (USA) 2000 ၏တရားစွဲဆိုမှု; 97: 12880-12884 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင် TE, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူဆက်နွယ် Kolb ခဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 33-46 ။ [PubMed]
Sandstrom NJ, Loy R ကို, Williams က CL ။ ငယ်ရွယ်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ၏ hippocampus နှင့်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင် choline ဖြည့်စွက်တိုး NGF အဆင့်ဆင့်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2002; 947: 9-16 ။ [PubMed]
Schanberg သည် SM, ဖျော်ဖြေမှု TM အလိုအလျောက်။ ကြွက် pup နှင့်စေ့ဘဲလူ့မွေးကင်းစကလေးအတွက်အာရုံခံဆင်းရဲချို့တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဖြည့်စွက်ဆွ။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1987; 58: 1431-1447 ။ [PubMed]
Sirevaag လေး, Greenough WT ။ , ရှုပ်ထွေးသောလူမှုရေးနှင့်တစ်ဦးချင်းစီပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတွေ့ကြွက်များတွင် Synaptic plasticity အတိုင်းအတာတစ် multivariate စာရင်းအင်းအကျဉ်းချုပ်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1987; 441: 386-392 ။ [PubMed]
Tees RC, Mohammadi အီးကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Spatial နှင့် configuration သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်မွေးကင်းစကလေးများ choline အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 1999; 35: 226-240 ။ [PubMed]
Teskey GC, Monfils MH, Silasi, G, Kolb ခ Neocortical Kindle neocortical အလွှာ III ကိုကနေ neocortical အလွှာ V နှငျ့ striatum အတွက် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်မြားတှငျပွောငျးလဲဆန့်ကျင်သူနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ synapses ။ 2006; 59: 1-9 ။ [PubMed]
Teskey GC ။ သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်, အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်ခြင်း, ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူဆက်စပ် neuroplastic အပြောင်းအလဲများကိုပုံစံ kindling အသုံးပြုခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Shaw, CA, McEachern JC, အယ်ဒီတာများ။ neuroplasticity တစ်သီအိုရီဆီသို့။ Philadelphia တွင်, PA: တေလာနှင့် Francis က; 2001 ။ စစ။ 347-358 ။
ဗန်တွင်း Bergh BR, Marcoen အေအထက်တန်းမီးမဖွားမှီမိခင်စိုးရိမ်စိတ်ပြဿနာများ externalizing, ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေမှ related နှင့် 8- နှင့်9နှစ်အရွယ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေသည်။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 2004; 75: 1085-1097 ။ [PubMed]
ရက်ကန်းဟု ICG ပြော, Cervoni N ကို, ရှန်ပိန်အက်ဖ်အေ, D'Alessio AC အ, Sharma က S နဲ့, Seckl JR, Dymov S က, Szf M က, Meaney MJ ။ မိခင်အပြုအမူအားဖြင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ် programming ကို။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004; 7: 847-854 ။ [PubMed]
ရက်ကန်းဟု ICG ပြော, Meaney M က, Szf အမ်မိခင်ဟာမိခင် transcriptome နှင့်လူကြီးအတွက်နောက်ပြန်လှည်သောအမျိုးအနွယ်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်-mediated အပြုအမူတွေအပေါ်သက်ရောက်မှုဂရုမစိုက်။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ (USA) 2006 ၏တရားစွဲဆိုမှု; 103: 3480-3486 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Weinstock အမ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ရေရှည်အပြုအမူအကျိုးဆက်များ။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2008; 32: 1073-1086 ။ [PubMed]
Wiesel TN, Hubel DH ။ တဦးတည်းမျက်စိထဲမှာဗျာဒိတ်ရူပါရုံဆုံးရှုံးပေါက်၏ striate cortex အတွက် single-ဆဲလ်တုံ့ပြန်မှု။ Neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 1963; 26: 1003-1017 ။ [PubMed]